Egwuregwu akụkọ Akụkọ Akụkọ Portal International
Egwuregwu Akụkọ Akụkọ Akụkọ Global WebSite.WS
Global Sports News Isi akụkọ Nkeji edemede weebụsaịtị(WS) buzz Media.Share na Weebụsaịtị njikọ niile n'efu.
Ekekọrịta Akụkọ Akụkọ Akụkọ Akụkọ n'etiti ndị mmadụ gburugburu ụwa na-eji mgbasa ozi mmekọrịta.
World Wide Portal Weebụ bụ Egwuregwu akụkọ Akụkọ Akụkọ Global.
Curation Media Global Site 「Egwuregwu Akụkọ Akụkọ Akụkọ Isiokwu Global WebSite.WSl Isiokwu WebSite.WS」 hụrụ mmadụ niile gburugburu. Egwuregwu akụkọ akụkọ a na-enye gị ihe ịtụnanya Soro na mgbasa ozi mgbasa ozi (SNS). Ijikọ saịtị gị na ibipụta isiokwu bụ All Share Free. Nweta usoro ndụ n'efu. Daalụ!!
Wepu ya niile
Enwebeghị oge ịchọrọ ịhapụ ihe niile? Na Machị na Eprel 1978, www.motherearthnews.com bipụtara akụkọ gbasara di na nwunye zụtara McLeod’s Island ‘ agwaetiti 90-acre n'akụkụ ụsọ oké osimiri Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada. Ha nwere anụmanụ ole na ole, emefu ego pere ezigbo ahia, ma agwaetiti ahụ kwadoro ya nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ na-ewetara ha ụfọdụ nsogbu: “Oke osimiri, ị mara, akpọghị “enweghi ike” n’efu. A […]
Cgbọ ala RC maka ịgba ọsọ
Inwe ugbo ala RC yiri nnweta nke gi, ụgbọ ala n'ezie. Ọ bụ ezie na ọ naghị egosi kpọmkwem na ị kwesịrị ime otu ihe ahụ maka ịgwọ ụgbọ ala RC otu ị si emeso nnukwu ụgbọala, ọ na-akpata oke ego maka mmezi. Enwere ihe dị iche, n’usoro imefu ego na ịnwe ụgbọ ala RC (ụgbọ elu, gwongworo ma ọ bụ na-adọkpụ) maka ihe egwuregwu ma ọ bụ maka ntụrụndụ. Ihe dị iche na-abụkarị n'eziokwu bụ na idebe otu maka ihe omume ntụrụndụ chọrọ mma dị iche iche maka arụmọrụ ka mma. Ebe ọ bụ na […]
Gini bu ihe omumu Golf
Omume gọọlfụ ogologo nwere ike ịgbakwunye 30 yaadị na draịva gị na obere oge. O doro anya na ị ga-akụ ọkpọ golf ogologo ị ga-achọ inwe ike. Power bụ Ẹkot nke ma ike na mgbanwe kpọmkwem gị golf siwing. Isi ihe na-emejuputa mmega gọọlfụ ogologo oge bụ ile anya na isi mmegharị na gọọlfụ gọọlfụ gị. Kedu ihe ọ bụ? Ọ bụ ngagharị nke akụkụ (akụkụ-na-n'akụkụ)? Ọ bụ vetikal ije (elu na ala)? Aga m akwụsị 'ajụjụ iri abụọ & # 8217 […]
Ihe Golf – Banyere elu
Knowingmara ka ịkwọ ụgbọala na putt abụghị naanị ihe ị kwesịrị ịmụ gbasara ịgba bọọlụ. Golf ịbụ ọrụ n'èzí ị na-egwuri egwu n'akụkụ ala dị ndụ, nakwa dị ka ọ bụla na mpụga, Nature Nature nwere mmasị igwu egwuregwu a. Ahịhịa dị iche iche; ị nwere ike ịnwe izute ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ahihia ahihia na obere uto ma ọlị. Putt nwere ike gbanwere site udidi, ogologo na udidi nke ahihia, na ole ahihia di ebe ahu. Ezigbo golfer anaghị egwu naanị anwụ na-acha […]
Họrọ akụrụngwa mmiri mmiri gị
Tupu ịmalite ịbanye mmiri mmiri dị ka egwuregwu ntụrụndụ, ọ dị mkpa ka ị nweta onwe gị ihe ndị dị mkpa ị ga-eji na mmiri na gia. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, ọ kachasị mma ịmalite site na isi ihe dị ka nkpuchi ahụ, ntù, okpokoro, na eriri ibu, mgbe ahụ gaa n'ihu na nhazi dị elu mgbe e mesịrị. Ihe Ndị Bụ Isi: Igwe nkpuchi mmiri na-enye gị ohere ịhụ n'okpuru mmiri site na efere iko dị n'ihu. Imirikiti ihe nkpuchi mmiri na-arụ n'ụzọ nke na onye ọrụ nwere ike ikupụta n'ime ya […]
Off-Road RC arsgbọ ala
Nwee ya ka ọ bụrụ ma ọ bụ igwe eletrọn RC kwadoro, ị ka ga-enwe ike inweta ezigbo, aka mbụ ahụmahụ nke inwe na ọduọ ihe RC car’ma ọ bụ ya bụ a gwongworo, ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ mmiri? Enwere nhọrọ ole na ole ma họrọkwa nhọrọ ndị ọzọ ịhọrọ n'ihi na ihe egwuregwu RC na-abịa n'ụdị na nha dị iche iche. Enwere nhọrọ abụọ maka ụgbọ ala RC gị. Nwere ike ma ọ ga-agba ọsọ ma ọ bụ pụọ n'okporo ụzọ mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem ọzọ ma gbakwunye adrenaline ole na ole na ahụmịhe ịgba ọsọ gị, ị ca […]
Gini mere eji eme Golf ka Dorky?
Ulo achicha golf so n’ime akwa kacha nma mmadu mara, ma gọọlfụ bụ otu n'ime egwuregwu ndị mara mma mara mmadụ-ihe kpatara njikọ? Nke ahụ bụ ihe m ga-achọ inyocha na mpempe akwụkwọ na-esonụ. Nọgidenụ na-agụ na-ahụ ma ọ bụrụ na ị na-ekweta na m ramblings. Ọtụtụ n'ime ndị golf kacha mma n'egwuregwu ahụ bụ ezigbo nnukwu dorks? Echere m na ị nwere ike ịhụ ihe kpatara ya, ọ dịbeghị mgbe ha mere ihe ọ bụla na ndụ kama igwu egwuregwu ma ndị nne ha na-enye ha nri kemgbe ụbọchị mbụ. Ha anaghị k […]
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta ezigbo njem n'ịkụ azụ, mgbe Canada bụ ebe kachasị mma maka gị. Canada nwere oke osimiri, ponds, ọdọ mmiri mmiri, nnu mmiri nnu na iyi. Mmiri mmiri na mmiri ịkụ azụ bụ ihe kacha amasị ndị Canada na ndị njem nleta. Azụ na Canada gụnyere anụ ọhịa bara ụba. Canada na-enye ọtụtụ njem ịkụ azụ na klas mbụ nke ga-eme ka oge na ego gị baa uru. Ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme ka obi jọọ gị njọ. Canada nwere t […]
Ngwongwo gọọlfụ golf kwesịrị ekwesị bụ ihe dị mkpa maka ịrụ ọrụ golf kacha mma. Ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ ndị golf, ị na-anwa mgbe nile ịmegharị nke ahụ 'zuru oke’ gọọlfụ golf. Ama m na m nọ. Ọ naghị adị ya mma nke ukwuu ịkụ ogbugba ahụ na-agba mbọ? Achọghị na ị ga - eme ya oge ọ bụla? Nke ahụ ga - abụ mmetụta yiri nke ihe pro nwere ọtụtụ oge. Ọ ga-adị elu! Yabụ kedu ihe na - egbochi gị imeziwanye gọọlfụ gwọlịk gị? Think chere gị […]
Okwu Banyere Mmeri ma Na-efufu: Ndụmọdụ Na-egwu Blackjack
Taa, blackjack dị ka otu n'ime egwuregwu kaadị kachasị ama. Nke a bụ n'ihi na ịkpọ blackjack dị mfe mmụta na igwu egwu. N'adịghị ka poker, blackjack enweghị njikọ ọ bụla icheta. Na blackjack, ebumnuche nke egwuregwu bụ iji nweta ngụkọta nke abụọ kaadị nso 21. Mgbe mmadụ na-enweta kaadị gafere 21, ọ na-efunari egwuregwu ahụ. Nọmalị, onye ọkpụkpọ na-enweta kaadị abụọ. Mgbe ndị egwuregwu ahụ hụrụ kaadị ha, ha kwesịrị ikpebi ma hà ga-akụ ma ọ bụ kwụrụ ọtọ. Mgbe mmadu kwuru & # 8 […]
Azu Na South Pacific
A maara South Pacific n'oge dị anya n'ihi ahụmahụ na-akpali akpali nke mmiri nwere ike ịnye. Ọ bụ ndị ama ama na-eme njem nleta na mba ndị agbata obi ya ama ama n'ihi ọhụụ na mkpali ọ nwere ike inye. Ọtụtụ ndị ọkụ azụ na-abịa New Zealand mgbe oge ọkọchị na-abịa na njedebe. Nke a bụ oge mgbe tuna na azụ azụ na-egwu mmiri n'akụkụ ikpere mmiri iji chọta ebe dị ọkụ. N’ọnwa asaa ndị ọzọ n’afọ, nke ahụ bụ oge ka ndị ọkụ azụ̀ nwee nnukwu oge ọ kachasị ọnwa ole t […]
Kwọ ụgbọ mmiri nwere ike ịbụ oge ezumike
Kwọ ụgbọ mmiri nwere ike ịbụ oge ezumike, na-ese n’elu osimiri n’enweghi nlekọta. Maka otutu mmadu, ụgbọ mmiri n'onwe ya bụ isi ihe ntụrụndụ: ozugbo ị banyere n'ụgbọ mmiri, edoziri gị. Ọtụtụ mmadụ na-ebute ụgbọ mmiri ha ebe ọ bụla ha ga-aga jiri ụgbọ mmiri na adọkpụ dị n’azụ ụgbọ ala ha, ma ọ bụrụhaala na ụgbọ mmiri ahụ pere mpe ‘ ekwesịrị idobe ụgbọ mmiri ndị buru ibu na marinas, nke nwere ike ịbụ ọnụ. Ọbụna taa, ọtụtụ mmadụ ka na-arụ ụgbọ mmiri nke ha […]
Ntụle nkuzi Golf maka mmega ahụ na Ọfịs Gị
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye golf na-anụ ọkụ n'obi nke na-eche banyere egwuregwu mgbe niile, ọbụna mgbe ị nọ n'ọfịs, mgbe ahụ ndụmọdụ ntụzi gọọlfụ a maka mmega ahụ n'ọfịs gị ga-abụ ezigbo enyemaka. Mana nke mbụ ọ dị mkpa ịghọta uru ịgbatị ahụrụ bara, nke bụ ihe golf ntụzi ntụziaka n'isiokwu a bụ ihe niile banyere. A na-eguzogide golf golf site na ahụ mmadụ n'ihi na ọ bụ usoro na-ekwekọghị n'okike, ka odi n’aru mmadu. Golf na-agbatị mgbatị ahụ […]
Atụmatụ nchebe maka ịgba ụta
Chergba ụta dị ka egwuregwu ọ bụla nwere iwu, ọtụtụ iwu bụ iwu kachasị mma nke a na-eji eme ka ndị na-agba ụta na ndị na-ekiri ha nwee nchebe. N’izugbe, ọ bụ omume dị mma idebe iwu ndị a ma ọ bụ sọsọ mpi ka ọ bụ maka iti egwu. 1. Ebumnuche Na-agbapụ akụ na mgbe niile. Akụ ga - abụ ngwa ọgụ dị egwu, ekwesighi ka ebumnuche ọ bụla na - abụghị ebumnuche. 2. Nyochaa Akụ ga-eji nlezianya nyochaa tupu ogbugba ọ bụla iji hụ na ha emebibeghị. Ọ bụrụ na akụ aro emebi ya […]
Ihe nkiri banyere ịgba chaa chaa na-abụkarị maka ntụrụndụ naanị na ekwesịghị iji ya kpọrọ ihe. Ọ bụ ezie na ndị na-agba golf na ndị ọzọ ga-anụ ụtọ akụkọ ahụ, odide, na nsonaazụ, ha kwesiri ịkpachara anya ka ha ghara ịkatọ egwuregwu golf na-egwuri egwu ka ha na-echepụta akụkọ ha site na nhazi na aghụghọ igwefoto ọtụtụ oge.. Ọ bụ ezie na ndị na-eme ihe nkiri nwere ike igwu golf n'oge oge ha, ha anaghị enwekarị ike ịme ọtụtụ aghụghọ ha yiri ka ha na-eme n'oge ihe nkiri ahụ. Ma nke a apụtaghị na […]
A Crash Agụmakwụkwọ na Bonuses Bonuses
Online casinos na-erubiga ụwa n'ịntanetị n'oge na-adịbeghị anya. Ọ dị ka ha na-agbasi mbọ ike na-adọta ọtụtụ ndị egwuregwu iji nwalee ọdịmma ha na casinos n'ịntanetị. Ha anọwo na-anwa iche echiche banyere onyinye dị iche iche iji dọta mmasị onye ọkpụkpọ. Otu nkwalite dị otú ahụ na-enye ụdị ego cha cha dị iche iche iji mee ka ndị mmadụ kpọọ egwuregwu na ntanetị ha. A na-enye onyinye ego cha cha site na casinos n'ịntanetị nke ga-enyere onye ọkpụkpọ aka inweta […]
Ndụmọdụ maka ịhọrọ oke onyinye Goofu
Ma ọ bụ onyinye gọọlfụ ekeresimesi maka golfer dị oke egwu ma ọ bụ ihe nrite na-atọ ụtọ maka njikọta ezinụlọ ma ọ bụ asọmpi ụlọ ọrụ, họpụta onyinye gọọlfụ nke nwere ekele maka ya na-ewe ntakịrị atụmatụ. Ndị a bụ ndụmọdụ ole na ole ga - enyere gị aka ịhazigharị onyinye gị na ọkwa nka onye goofer. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọpụta ọkwa nka golfer ga - anata onyinye ahụ. A seasoned vetiran nke egwuregwu na a 4 handicap nwere ike tinye obere uru n'akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ihe enyemaka […]
Achara Na-ekewa Mkpanaka Mkpanaka
Teknụzụ nke oge a emepewo ọtụtụ ihe dị mfe ma dị mma maka anyị. Maka ndị na-akụ azụ hụrụ n'anya na-ejide azụ, otu nke onyinye ọgbara ọhụrụ pụtara ìhè na mmepe nke ijiji azu mkpara. Na mbụ, ofufe iji azu mkpara e mere nanị site achara na gbawara n'etiti okpete. Mana tupu achoputa achara maka iku azu, ọ bụ ebe okpomọkụ osisi a na-akpọ greenheart nke pụrụ ịchọta n'ógbè Guangdong na China na ọtụtụ ndị na-eji dị ka ihe maka mkpara na ada fis […]
Ihe Golf na-agbapụ Nzuzo iji melite arụmọrụ
Omume ka ibu na nke isi ibu klọb n'afọ ndị na-adịbeghị anya emeela ka golf na-agbatị ihe nzuzo dị mkpa karịa inweta. Iji mee ka ihe ka njọ maka ndị gọọmenti enweghị mmasị ịnabata golf na-agbasa ihe nzuzo, golf bụ egwuregwu n'adịghị ka egwuregwu ndị ọzọ ebe egwuregwu na-aga n'ihu na-eme ka ahụike na ntachi obi dịkwuo mma. Nke a bụ n'ihi na gọọlfụ gọọlfụ na-adịgide naanị nkeji. Ọ bụ ihe na-akụzi ihe na ọtụtụ ndị gọọlfụ amatabeghị eziokwu a dị ezigbo mkpa. Nke a bụ ihe kpatara ha ji hụ ya nke ukwuu […]
Nchekwa Nchekwa Azu
Ishingkụ azụ bụ ihe ezumike ma bụrụkwa ihe na-atọ ụtọ ịme mgbe ndị ezinụlọ na ndị ị hụrụ n'anya mere n'oge ezumike obere oge ma ọ bụ karịa na ngwụsị izu. O nwere ike iyi ka ọ bụghị egwuregwu nkịtị maka ọtụtụ ndị, ma yiri ihe ọ bụla ọzọ na-eme n'èzí, ịkụ azụ ka chọrọ nchekwa. Ọ dịghị onye kwesịrị imebi nchekwa. N'ụzọ bụ isi, tupu ịpụ apụ azụ, Gbaa mbọ hụ na uwe gị dabara maka ọrụ ahụ. Ihu igwe kwesịrị mgbe niile-etinye na akaụntụ n'ihi na ị nwere ike mgbe ịgwa ma ọ bụrụ na […]
Ihe iji weta Egwuregwu bọọlụ
O doro anya na ọ dịghị ihe dị mma karịa ịga egwuregwu NFL na-egwu egwuregwu ma na-enwe obi ụtọ niile na-emetụta ihe omume egwuregwu a n'onwe gị. Maka ndị na-amaghị ihe ha ga-eweta n'egwuregwu ahụ, enwere ihe ole na ole dị mkpa nke ndị niile na-egwu egwuregwu na ndị na-ekiri ha na-ekwesịghị ịdị. Uwe Kwesịrị Ekwesị Nke mbụ, onye na-aga egwuregwu egwuregwu NFL kwesịrị iyi uwe kwesịrị ekwesị iji hụ na ahụmịhe ha bụ ihe na-atọ ụtọ. Fans kwesịrị iyi akwa uwe nke ahụ bụ […]
Nkwụ Ngalaba 1
Palmgwè Nkwụ Q&A Na Sigung Richard Clear Part 1 Q. Kedu ihe bụ akụkọ banyere ọzụzụ nkwụ gị? A. Onye nkuzi m bụ Tyrone Jackson bụ onye bụụrụ okenye nke Dr Fred Wu. Dr Wu bụ onye na-eso ụzọ na-eso ụzọ n'okpuru Lee Ying-Arng. Lee Ying-Arng bụ ihe ịtụnanya na nnukwu Kung Fu Master site n'ọgbọ ikpeazụ nke mechara biri na Hong Kong. N'ebe ahụ, ọ bụ President nke Inner System Martial Arts Association, Onye isi oche nke Hong Kong Acupuncture Research Center, na Onye isi oche […]
Usoro Ggba chaa chaa nke na-arụ ọrụ
Ebe ọ bụ na ịgba chaa chaa malitere, enweela ndị gbalịsiri ike ịchọta usoro ịgba chaa chaa zuru oke – otu nke na-etinye ihe ga-eme ka ihe na-adabara onye na-agba chaa chaa nke na ọ fọrọ nke nta ka akụnụba bụrụ ihe e ji n'aka. N'ime puku afọ ndị a niile, enwere onye ọ bụla chọtara usoro ịgba chaa chaa nke na-arụ ọrụ? Ọ bụ ezie na e nwere ndị na-azọrọ na ha achọtala usoro iji merie nsogbu ọ bụla n'ụdị ịgba chaa chaa ọ bụla, ọtụtụ usoro ịgba chaa chaa ị nụrụ banyere ya bụ maka otu ụdị ịgba chaa chaa; dị ka Blac […]
Ndị Golf Club: Isi ihe isii ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ onye ga-etinye ya
A ga-echebara ihe isii a echiche ka ị nwee ike ịhọrọ ụdị ụdị pịịlị na iji jide n'aka na ọ dị ka ọ kwesịrị. 1. Ugha ụgha. Ọ bụ akụkụ dị n'etiti osisi na ala. Ihe a na-ekpebi ma ọ bụrụ na isi onye na-etinye ihe na-anọdụ ala n'ụzọ zuru oke mgbe ị na-etinye ya. Nweta nke ga-eme ka isi klọb zuo ike n'ala mgbe ị kwụ ọtọ. 2. Ogologo onye tinye ya. Ogologo ọkọlọtọ maka onye na-etinye ya bụ 35 sentimita asatọ. Nri […]
Lykụ azụ – Na ofchọ Ọchụso
Na ada azu, mgbe ụfọdụ ọ na-abụ maka ịchụ. Nke a bụ njem ụbọchị nke yiri nke na-adịghị amị mkpụrụ, mana tụgharịa nke ọma n'ikpeazụ. Anyị na-etinye rafti na ụtụtụ na-ekpo ọkụ na Sept.. enweghị igwe ojii na anya. Ihe m tụrụ anya ya adịghị elu, ebe ọ bụ na anwụ na-achasi ike n’oge anwụ na-achọ ịwụnye azụ, ma ọ dịkarịa ala na mgbatị nke Colorado. Mgbe azụ anaghị ebili, Ana m aga ogologo maka ihe iyi egwu; ọ dịghị ihe na-atọ ụtọ karịa nnukwu iwe na-acha aja aja na-achụ st gị […]
Drew Brees: 2001 Achọpụta Day Day
A mụrụ Drew Brees na Jenụwarị 15, 1979 ke Austin, Texas. Ọ bụ ezie na Brees abụghị nnukwu egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu kachasị egwu na NFL, ọ bụ n'ezie otu n'ime ndị kasị mma. Kemgbe ọ bụ nwata, a manyere ya igosi na ịrụsi ọrụ ike na mkpebi siri ike nwere ike ịpụta ihe dịka egwuregwu na oke. Otu ihe doro anya; Brees emewo nke a nke ọma kemgbe oge ụfọdụ. Brees gbara bọọlụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya na Austin, Texas na Westlake High School. N'oge agadi ya, Brees duuru tii ya […]
Inwekwu Ntughari Na Ezigbo Ezi
Mgbe m nwetara gọọlfụ m n’aka m, Ọ dị m ka ịkụ aka mkpuchi ahụ ozugbo na bọl. Ọ na-eme m obi ụtọ mgbe m jiri ike m niile see bọọlụ. Naanị inwe ike ịkụ bọl siri ike apụtaghị na m na-egwu ezigbo egwuregwu golf n'agbanyeghị. Y’oburu na ichoro obere mgbada n’iru, n'ụzọ ọ bụla ma nke a ka mma ịhapụ ebe ịkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ n’ịchọrọ igwu egwuregwu bọọlụ ọma, ịkwesịrị ijide obere na ike. Otu n'ime ndudue kachasị nke ndị golf’ Mee bụ t […]
Nkà nke Fkụ azụ
Kedu ihe bụ ịkụ azụ? Maka otutu mmadu, ịkụ azụ bụ naanị ịkụ azụ. Tụfuo nri ụfọdụ na ahịrị, ituli ya na mmiri na-eche a nibble, mana ijiji azu ndi na achu azu, ọ karịrị nnọọ. Angzọ angling oge ochie, ijiji azu bu usoro nke emeputara na mbu maka ijide azu na salmon. Ugbu a, Otú ọ dị, a na-ejikwa ya ejide pike, azu kaapu, bass na umu ndi ozo. Ijiji na-efe efe na-eji efe efe, nke a na-ekekọta ya na nko ya na iji eri, ábụ́bà, aji […]
Golf Channel na-eme nke ọma
Ewu ewu nke Channel Golf agbawaala. Ndị na-agba chaa chaa na Amateur na-elele karịa oge ọ bụla ọzọ iji nweta otu ndụmọdụ pụrụ iche nke nwere ike imeziwanye egwuregwu ha. Ogwe gọọmenti nwere nnukwu ihe onwunwe dị n'akụkụ ọ bụla, na-arụ ọrụ gị siwing ka ịga nke ọma ụzọ iti si a ájá ọnyà. Gaa ntakịrị ntakịrị na ebe nrụọrụ weebụ ha ma ị ga-ahụ ọtụtụ ndụmọdụ na aro maka imeziwanye arụmọrụ gị na usoro ahụ. Ọtụtụ na-eleghara otu n'ime ebe kachasị mkpa iji meziwanye egwuregwu ha. T […]
Ọfịs m – N'azụ Pate.
Enwere m mmasị ijide – Enwere m egwuregwu niile n'ihu m. Enwere m ike ịhụ ihe niile. Idebe ndị na-akọ ubi bụ ọrụ m. Hụ ma bọọlụ ogologo oge dị mma ma ọ bụ nke rụrụ arụ. Ihe ite mmiri ahụ nwere ma ọ bụ enweghị, Ahuru m, nakwa. Ndi osi ite chọrọ ezumike na ihe n'ihi na ike gwụrụ ya? Ọ bụrụ na o mee, aga m eleta obere mkpumkpu ugwu ahụ. Ọchịagha n'ọhịa bụ ihe m bụ. A na njikọta onye nchịkwa. Chinggbanwe ịchụ nta bụ ihe kachasị mma m mere dịka onye ọkpụkpọ. Enwere m ezigbo obi ụtọ n'azụ efere ahụ. Nke m […]
Smụ ehi Dallas
A na-akpọkarị ndị na-agba ịnyịnya Dallas “Otu America” na ọ bụ ezigbo mfe ịhụ ihe mere. O doro anya na ha nwere ọtụtụ ndị fans n'etiti ndị otu NFL niile, ekele ha storied akụkọ ihe mere eme na ha phalanx nke oké egwuregwu. Ndị na-agba ịnyịnya, ndị na-egwu egwu ugbu a na mpaghara Irving na Dallas, Texas, nwere ọhụụ Super Bowl nwere asatọ. Ha jikwa ndekọ maka asọmpi Super Bowl kachasị na NFL na ise, ihe ndekọ na ha na ndị Pi […]
Ihe mere Golf Golf Training ji enyere gị aka
Ndị na-enyere ndị na-enyere ndị na-agba golf aka nwere aha ọjọọ na imirikiti ndị na-agba chaa chaa na-amakarị. Ọtụtụ n'ime ha abụwo ndị ụlọ ọrụ na-eme ihe ike na-ere ihe nkuzi ịkụ gọlfụ. Ihe si na ya pụta bụ na ọtụtụ n'ime ha mechara zụta ihe n'ebughị ụzọ lekwasị anya n'adịghị ike dị iche iche ha nwere n'egwuregwu ha chọrọ idozi. Ndị ọzọ zụrụ nkuzi ọzụzụ gọlfụ na-enweghị uru ndị ọkachamara nyere. Ọtụtụ mgbe obibia abụwo ijide nke kacha ọhụrụ golf siwing ọzụzụ AIDS na ahịa, rath […]
Echiche Na Freshwater vs.. Azụ Saltwater
Enwere m mmasị n'ịkụ azụ ụdị ọ bụla, ma ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịkụ azụ na mmiri nnu ma ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịkụ azụ na mmiri ọhụrụ. Ọtụtụ ndị na-enwe mkpebi siri ike banyere mkpebi ha, na mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịme ụdị mmeghachi omume site n'aka ha dịka ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị jụọ okpukpe ha. Azụ mmiri na-abụkarị ụdị azụ azụ nke nwayọ nwayọ nwayọ karịa na-echekwube n'etiti nkịta na ịchụ azụ. Also nwekwara ike ịrụsi ọrụ ike karịa ịchọta azụ mgbe ị na-akụ azụ na mmiri ọhụrụ. Otú ọ dị m na-eche na fis […]
Tupu singzụta Onyinye Maka Golfer…Jụọ Onwe Gị Ndị A 3 Mme mbụme
Okwesiri ka o doo onye obula anya na onyinye nke onye na-agba golf ga-enwe ekele kachasi, bụ nke na-eme ka egwuregwu ha ka mma. Ọtụtụ ndị gọọlfụ na-achọkarị ụzọ ha ga-esi mee ka egwuregwu ha ka mma. Ọ na-achịkwa echiche ha niile mgbe ha na-aga akwụkwọ na ọtụtụ oge mgbe ha na-apụ. Tupu ịhọrọ onyinye maka golfer, ọ bara uru ịjụ onwe gị ihe ndị a 3 ajụjụ na iji nweta azịza zuru oke maka ha. Cheta na nke a bu oru nke kariri ihe mgbagwoju anya […]
Mixed Mara Arts-Mụta Okwu
Site na iwu na ịkwado ụfọdụ ihe omume mara mma enweela mgbawa nke ụmụazụ ọhụrụ nke mma (mbuaha karat) Ebumnuche nke isiokwu a bụ iji nyere ndị ọhụrụ na-egwu egwuregwu a aka ịghọta ụfọdụ okwu eji eme ihe. Ọ bụrụ n’inwee nghọta dị nkenke banyere ụfọdụ okwu okwu ị ga-ahụ ile egwuregwu a ka ọ na-atọkwu ụtọ. Buru n'uche na nkọwa a abụghị akụkụ niile, mana ihe ndu maka onye mbido. Nnyefe: nnyefe bụ usoro […]
Ike gosipụtara ‘ Na Aka Aka
Cheta oge ị nọ na High School. Ọtụtụ ndị odide na ndị mmadụ. Nnukwu ụmụ okorobịa, nnukwu ọnụ, ụmụ okorobịa, gals na-atọ ọchị na ọtụtụ ọtụtụ ndị nwere ụdị ụmụaka. Nke a bụ otu m chere na ị ga-emetụta. Echiche mbụ m nwere banyere Gillie dị ka 12 otu afọ. Ọ dị nnọọ ukwuu. Echetara m na m chere na achọghị m ka ọ kụọ m ihe. Ọ bụrụ na m nwere Gillie na otu m maara na m nwere njedebe. Uru dị ike. Gillie bụ Paul Bunyon nke agbata obi m. Ọ nwere 20-22 biceps, na olu fọrọ nke nta ka rou […]
Vital Golf Swing Movement Na-eweta Ọganiihu
'Echere m na ọ bụ ihe ị na-ekwu banyere otu esi agbanye ogwe aka n'ụzọ ziri ezi nke kpatara ezigbo mmelite na golf m. Anọ m na-egwu golf 18 afọ na m mgbe n'ihu jisiri nnọọ ịmụta a ije. Ma ugbu a klọb ahụ yiri ka ọ na-abịa squall na bọl oge ọ bụla m na-egwu.’ 'Nke gi bu akwukwo mbu m guru banyere golf golf nke nwere nkowa doro anya banyere otu esi eji ogwe aka mmadu eme ihe nke oma, na ihe dị iche na ọ na-eme otu ugboro mana […]
Clinton Portis : 2002 Achọpụta Day Day
A mụrụ Clinton Portis na Septemba 1, 1981 na Laurel Mississippi. A na-ewere Portis dị ka otu n'ime ihe kachasị mma na-agba ọsọ na egwuregwu taa, nke a mekwara kemgbe ọ na-egwu bọọlụ sekọndrị. Na nha, egwuregwu egwuregwu, na ọsọ ọ dị mfe ịhụ ihe mere Portis ji ejide elu ọtụtụ narị yaadị n'afọ na n'afọ. Mgbe Portis rụchara ọrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwere ikike igwu bọọlụ kọleji n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ọ bụla na mba ahụ dum. O kpebiri iwere egwuregwu ya na Universi […]
Ndụmọdụ dị elu iji bulie egwuregwu gọọlfụ gị ọsọ ọsọ
Golfgba gọọlfụ bụ maka ịgbanye. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo siwing ị ga-azụlite ihe magburu onwe golf egwuregwu. Ọ bụrụ na gị siwing enweghị ike na nzube gị golf egwuregwu ga-ata ahụhụ. O di nwute, nke a bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha nke igwu golf. Learningmụta otu esi esi egwu gọọlfụ gị abụghị naanị ihe dị oke mkpa iji meziwanye egwuregwu gọọlfụ gị, ọ bụkwa ya kacha sie ike. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị gọọmenti ọhụrụ nọ n'ebe ahụ hụrụ na ha enweghị ike iburu klọb gọọmenti ma malite ịkụgharị dị ka pro. N'ihi na m […]
10 Ultimate Texas Hold’em na-agwa – akụkụ 1
Being Able to distinguish the Cards of a player would help you to save you’re money when you have a bad hand and win you the pot when you have a good hand. N'ezie, you can’t see what cards you’re opponents have. The only thing you have is there facial and body expressions. In this 2 part guide, I will teach 10 of the best tips on the net. These are amazing secrets that will help you win every dollar on the table you are playing at. Ihe banyere onye ọkpụkpọ sitere na ihe ha […]
Bọọlụ Tandem Na-adị Iche Iche ‘ Newdị ịnyịnya ígwè ọhụrụ emere maka mmadụ abụọ
N’isiokwu ndị bu nke a anyị lebara anya ebe igwe kwụgharị n’ahịrị si na kedu uru ya n’isiokwu a, anyị ga-eleba anya n’ihe kpatara gị na onye gị na ya ga-eji tụlee igwe kwụ otu ebe na ebe ị ga-eji azụ ụgbọ ịnyịnya dị ka nke ọzọ ị ga-azụ.. N'okpuru ebe a bụ ihe kpatara ịzụrụ igwe eji agba ịnyịnya ígwè na-agba agba nwere ike ịbụ nhọrọ ziri ezi ka ịme. 1. Agaghịzi achọ iji ụgbọ ala maka obere njem ndị a na gburugburu obodo gị. Naanị banye na ịnyịnya ígwè gị na cy […]
Ọzụzụ Golf Fitness Na-agbakọ Golf Golf
Ọ bụrụ na ị na-ele gọọlfụ ọ bụla na telivishọn, ị ga-enwe obi abụọ na ị nụla ka onye na-ekwu okwu na-ekwu banyere nkuzi mgbatị golf. Ọ bụghị ihe nzuzo na 95 pasent nke ndị ọkachamara golf na-eme ụfọdụ maka ọzụzụ ahụike golf. Ọ bụrụ na ndụ dị na arụmọrụ ha ma ha na-ekere òkè na ọzụzụ ọzụzụ golf, gịnị kpatara na ndị golf na-amu amu agaghị eme otu ihe ahụ? Golf golf bụ otu n'ime mmegharị ahụ na-achọsi ike n'ahụ mmadụ nke egwuregwu niile. Ngabiga a t […]
Azụ Azụ Bass
Ngwadogwu Bass bụ Ihe Kachasị Egwu maka ịkụ azụ Bass ịkụ azụ bụ ụzọ mara mma iji zuru ike. A na-enwe ọtụtụ asọmpi na United States, nke bụ ụlọ nke bass n'etiti akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Good Bass ịkụ azụ bụ ihe dị mkpa maka ọganiihu gị dị ka onye na-akụ azụ bass (ma obu nwanyi). Bass azụ azụ ‘ ihe na-eme ya ọpụrụiche? Mgbe ị na-akụ ọkpọ, gini ka ị ga-anọnyere gị mgbe niile? Otu ụzọ uwe ọkpọ. Mgbe ị gara ịkụ azụ, kedu ihe ị ga-eme […]
Egwuregwu Golf Zuru Okè Site na Mgbanwe na Ọdịdị Dị Mma
Onye ọ bụla golfer na-aga n'ihu na-achọ mmetụta ahụ na-enweghị isi nke nkedo zuru oke. Edere akwụkwọ n’isiokwu a. Nkuzi vidiyo na-ekwe nkwa na 'nzuzo nke zuru okè siwing’ ree dị ka hotcakes site na iji akwụkwọ ozi na ịntanetị. Onye ọ bụla nọ ebe niile chọrọ ịma ihe ọ dị mkpa ka ha mee iji mee ka ọ gafere. Eziokwu adịghị na ‘enweghị ngbanwe zuru oke’ ‘ ọ dịkarịa ala, ọ dịghị usoro ọ bụla iji nweta ya. Ọ bụrụ na anyị amụtala ihe ọ bụla site na afọ nke na-ele profe […]
Ngwa ngwa na oke iwe na-aga karts! Esi zụta otu ọnụ ala!
Gaa karts nwere ike ime ka obi gị gbapụta dị ka ihe ọ bụla. Y’oburu n’icho gi obi uto nke ije karting na inwu na izuta ugha ohuru nke oma karia uzo ole na ole ichoro imuta. Obere ntachi obi gaa karts enwere ike zuta ihe dika 50% apụ nke ọnụahịa mkpọsa oge niile. Ha bụ nnọọ fun, ha abụrụla ndị a ma ama n’ụbọchị ndị a. Nwere ike ịchọta karts na ebe ọ bụla ezinụlọ na-ekpori ndụ ma ọ bụ ogige ntụrụndụ. Racing go karts ma ọ bụ n'okporo ụzọ gokarts bụ […]
Mmega azụ na goofu bụ otu
Laghachi mmega na golf. Nke ahụ ọ dịghị ka ụda nkịtị? N'ime mmerụ ahụ niile na golf, azụ dị ala bụ nke kachasị elu. Iji kọwaa ihe mere ịmegharị azụ maka golf ji dị mkpa, onye na-agba golf kwesịrị ịghọta ihe kpatara ya. Ihe nkedo golf bu otu kacha (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ) mmegharị nrụgide na ala azụ. Kere ban̄a emi. ’Re nọ n’ọnọdụ static na mbido; mgbe ahụ ị na-agbalị ịtụgharị gị elu ahu dị ka ị nwere ike ịga, na-eme ka ahụ dị ala dị ka o kwere mee […]
Chọta Golf Driver
Enwere ọtụtụ ngwa nwere ike inyere gị aka igwu egwuregwu golf kacha mma. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịnweta oge nke swing gị ziri ezi, ịzụta golf metronome nwere ike inyere aka. Jiri ụda nke metronome, ị ga-enwe ike oge gị siwing na n'afọ iri na ụma. Nke a bụ nnukwu ngwaọrụ iji rụọ ọrụ iji meziwanye mkpokọta gị, na-etinye, na mmegharị ahụ ndị ọzọ. O nwekwara ike ime ka obi ruo gị ala mgbe ị na-egwu egwu, nke ga - emekwa ka egwuregwu gi di nma. Ngwaọrụ ọzọ ị ga - eji ma ọ bụrụ na akara goolu ga - enyere gị aka ijide trac […]
6 Aka Online oghere Atụmatụ
Gba chaa chaa bụ ụwa ebe ọ dị ka a ga - asị na onye ọ bụla na - anwa inye gị ego. Mana nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ịgba cha cha niile na ebe egwuregwu na-adọrọ gị na-enwe olileanya ịhụ obere akpa gị na-ada nha. Onye ọ bụla na-agba chaa chaa na-arọ nrọ nke otu nnukwu mmeri, mana maka ọtụtụ ọ ka bụụrụ nrọ. Oghere oghere bụ ụzọ na-adịghị emerụ ahụ iji weghara ego ole ị na-atọghe ma merie. Ọ bụ ụzọ ebe ị pụrụ igwu egwu na a nọrọ jụụ uche na-adịghị mkpa na-akpa nkata, atụmatụ, ma ọ bụ maa. N'ebe a, ihu ọma na-elekọta. Ọfọn, […]
Nwee Fit Maka Golf Iji Gwuo Gị Nke kacha mma
Adaba maka golf bụ okwu ị kwesịrị ịnụ ugbu a. Ọ bụ ihe niile na telivishọn ma ugbu a na-aghọ isi na ndị na-agba chaa chaa na-achọ ịbịaru oke ha. Ndị Golfers na-amata ugbu a na enwere ahụ ike na golf, ma na-echesi echiche ike na ọ dabara maka golf. Ọ nwere ike ịdị ka okpokoro ikuku, mana gwa m ma oburu na imetu onwe gi aru igwu golf. Kedu maka mgbada agbada? Ma ọ bụ, akpịrị mgbu mgbe ọ gwusịrị? Ndepụta mmerụ ahụ site na ịgbagharị golf golf i […]
Azụ Saltwater: Isi Ihe I Kwesịrị Tomara
Azụ ị na-azụ azụ na ịkụ azụ nnu nwere ike ịbụ ndị a: – okporo – tarpon – kpọọ – oke osimiri – makarel – barracuda – sọdfish – bass – tuna – shark – na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Gear Need chọrọ nke mbụ na nke kachasị mkpa, ị chọrọ ezigbo mma mkpara. Gaa maka 8 na ọkara ka 9 ụkwụ. Ọzọkwa, amụma mkpuchi na ọ bụ ezigbo mma dịka ị ga-achọ ike. Na-esi anwụde, ị kwesịrị ị na-aga n'ihi na ndị na-echebe site saltwater corrosion. Chọọ maka ndị ahụ ejiri igwe anaghị ata nchara, titanium ma ọ bụ eriri / resin. Ọzọ, je na ezi nhọrọ di nma, otu nke dịkarịa ala $100. Maka akara gị, ị ga-achọ eriri na-ese n'elu mmiri maka ebe dị larịị ma ọ bụ nke na-emighị emi. Maka ịkụ azụ n'okpuru mmiri, jeye ihe doro anya, etiti ala akara. Gbalịa otu n'ime doro anya, imi n'ọnụ edoghi kwa. N'ime ndị isi, ị chọrọ onye ndu toro ogologo maka azụ ihere. Maka nke dị mma, jeye ndu ọdo. Ọzọkwa, ijiji. Ikwesiri ịhọrọ ụdị ijiji. You nwere ike ịzụta ha n'ụdị dịgasị iche iche ma ọ bụ chọọ ndị ọkachamara na-akwalite. Ugbu a, Nkedo you mere ihe ọ bụla ofufe mgbatị maka trout? Eeh? Mgbe ahụ, ị gaghị enwe nsogbu. Ihe mgbaru ọsọ bụ ịga ìhè. Efefela nke bụ mgbe ị na-eji akara karịrị akara aro maka mkpanaka ịkụ azụ gị. Enweghị ahụmịhe? Gbalịa iji uru nke ụfọdụ nkuzi tupu ị gawa ma ọ bụ were ọkachamara ga - akụziri gị. Abia na iku azu gi, ewelikwa mkpanaka gị elu n’elu ikuku. Chọghị ịlụ ọgụ ya. Gbalịa iwe iwe usoro igwu mmiri nke azụ site na ịpịgharịa ya. Mgbe ị dị njikere iwe ya, mee ka mkpara gị dị ala. Ọ bụrụ na ị dị elu rapara ya, ọ bụzi na ị ga-agbaji mkpanaka gị. Jiri ihe eji eme akwa na uwe aka iji jide n'aka na ị gaghị emerụ ahụ. Ihe ị ga-eji dinaa gị can nwere ike iji ma ihe eji ebi na nri mmiri ara na-egbu azụ na nnu mmiri. Nwere ike iji ngwaahịa dị ndụ na nke sitere n'okike maka ọtụtụ azụ. Imirikiti ga-azụ shrimp na baitfish nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe azụ gị ga-ejikarị mee nri ya, o yikarịrị ka ị ga-enweta kụrụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe dịka crayfish, crabs, oysters na crustacean. Hụ na ị naghị ebu ibu. Nha nke nko gi kwesiri ikiri ka nri gi. Ihe a niile nwere nke ị dị njikere ịga iji nwee ọ adventureụ dị egwu dị egwu nke ịkụ azụ nnu. Nwere ike ịchọta ọtụtụ akụrụngwa gị na ọtụtụ ozi dị n'ịntanetị maka njem mmiri saltwater gị ọzọ. Azụ Saltwater: Isi Ihe I Kwesịrị Tomara
A kọwara obere uwe osimiri
Uwe mmiri dị n'ụsọ mmiri bụ ụdị mkpirisi pụrụ iche nke e mere iji mee mmiri. Ha anaghị agba mmiri, ma ha abụghị obere mkpirisi ma ‘ ha bụ ụdị mkpirisi pụrụ iche emere iji dị ka obere mkpirisi nkịtị, ma n'otu oge ahụ emepụtara ka mmiri na mmiri mmiri kpoo ma kpoo ngwa ngwa n'enweghị nsogbu ọ bụla. A na-ejikarị ha eme ihe dị ka lycra, flannel ma ọ bụ naịlọn, nke a na - ahọrọ ka ọ kpoo ọkụ ọkụ ma ọ bụghị oke ọkụ. Ha bụ ezigbo ihe ọzọ na akpati, ma na-ewerekarị ma ndị ọzọ ejiji, karịsịa n'etiti ụmụ okorobịa, nakwa dị ka obi umeala na ha anaghị ekpughe ọtụtụ. Otú ọ dị, ụfọdụ nịịka ka na-abịa na a Kporo Ọdịdị na n'ime, iji nye nkwado nke akpati mgbe ị ka na-enye ọdịdị nke mkpụmkpụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eyi naanị mkpụmkpụ n'ụsọ osimiri mgbe ha na-aga n'ụsọ osimiri, ndị mmadụ bi n’obodo ndị dị n’akụkụ osimiri na-eyikarị mgbe niile iyi uwe ndị dị n’akụkụ osimiri, ọ bụrụ na ọ dị ha ka ha agaa n'ụsọ osimiri otu ụbọchị. Nke a dị mfe ịhụ mgbe ị na-agagharị n'otu n'ime obodo ndị a, ma nwee ike iju gi anya ma mmadu obula n’azo osimiri! Uwe mmiri dị mkpụmkpụ abụghị naanị maka iguzo n'akụkụ oké osimiri, ọ bụ ezie ‘ ha dịkwa mma maka iyi n'ụsọ osimiri n'onwe ya, ndị surfers na-ejikarị ha. Ndị na-efe n'elu ga-agba mbọ hụ na ha jiri obere mkpirisi, Otú ọ dị, dị ka ndị dị ọnụ ala na-adịkarị mfe ịpụta mgbe ị kụrụ mmiri siri ike. Otu okwu, ọ bụ ezie: Shordị ụsọ mmiri n'ụdị Hawaii abụghị ejiji, na olile anya enweghi mgbe ozo, ya mere na emela. Nọrọ nke nnukwu, ụkpụrụ na-adịghị mma na mkpirisi osimiri gị, ma gaa maka agba larịị kama. Tụkwasa m obi, ị gaghị akwa ụta. Ọ dịkwa mma ịkọ na ị nwere ike ịga maka agba ọchịchịrị karịa nke ọkụ, dị ka ìhè na agba nwere ike ibu ịhụ site na mgbe ha ga-esi nnọọ mmiri, na chlorine si na igwu mmiri ị na-eji ha nwere ike ime ka agba ịjụ oyi. A kọwara obere uwe osimiri
Omume ka ibu na nke isi ibu klọb n'afọ ndị na-adịbeghị anya emeela ka golf na-agbatị ihe nzuzo dị mkpa karịa inweta. Iji mee ka ihe ka njọ maka ndị gọọmenti enweghị mmasị ịnabata golf na-agbasa ihe nzuzo, golf bụ egwuregwu n'adịghị ka egwuregwu ndị ọzọ ebe egwuregwu na-aga n'ihu na-eme ka ahụike na ntachi obi dịkwuo mma. Nke a bụ n'ihi na gọọlfụ gọọlfụ na-adịgide naanị nkeji. Ọ bụ ihe na-akụzi ihe na ọtụtụ ndị gọọlfụ amatabeghị eziokwu a dị ezigbo mkpa. Nke a bụ ihe kpatara ha ji esiri ha ike ịhụ ọganihu ọ bụla n'egwuregwu ha. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-adịkarị ịhụ ndị golf na-eme ịkụ bọl ruo ọtụtụ awa. Ederede kwesịrị ịdị na mgbidi n'ezie ugbu a. Na nke ahụ bụ na o yighị ka ọ ga-eme ka egwuregwu ọ bụla nke golfer dị mma ma ọ bụrụ na ahụ ha adịghị mma golf. Mkpụrụ ahụ na-adabaghị adaba na-abụkarị ihe nzuzu ma sie ike, na-eme ka a ọma golf egwuregwu fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume n'ihi na a onye na-agba goof ga-ike gwụrụ mfe na iji ezi golf siwing ga-fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume. Mụta golf ịgbatị ihe nzuzo kwesịrị ime ka onye golf na-eme ihe omume kwesịrị ekwesị nke ga-eme ka ọ dịkwuo mma na-agbanwe nke ahụ ma si otú a nwee mmetụta dị mma na golf golf ha na akụkụ niile nke egwuregwu ahụ.. Golf na-agbatị ihe nzuzo na-agụnye eziokwu ahụ bụ na mgbatị na-agbatị dị oke mkpa n'ilekọta ihe akụrụngwa kachasị dị mkpa ma dị egwu. Nke ahụ bụkwa ahụ. Ikike mgbatị aka ziri ezi ga-enyere ahụ aka ịnagide egwuregwu golf nke bụ egwuregwu na-achọsi ike n'ụzọ anụ ahụ. Ọ chọrọ ume, ntachi obi na muscular akara iji tie golf bọọlụ na oke ọsọ na n'ụzọ ziri ezi, na-aga n'ihu na golf. Mụta ihe nzuzo nke ịgbatị gọọlfụ ga-enyekwa onye golfer ohere ịme mgbatị ahụ ziri ezi ọbụlagodi tupu ha abanye na usoro dị egwu. Nkwadebe niile a pụtara na ahụ ga-adị njikere ịrụ ya’ kacha mma na nsonaazụ ga-egosi n'ụzọ doro anya ezigbo uru nke golf na-agbatị ihe nzuzo. Ihe Golf na-agbapụ Nzuzo iji melite arụmọrụ
Akwa maka ndị mbido – Inflatable Sit-On-Top Kayak
Maka ndị mbido, Inflatable kayaks bụkarị ebe ị ga-amalite ịmụ ihe. Modelsdị ịnọdụ ala dị n'elu emeela ka ọtụtụ mmadụ banye n'egwuregwu a na-eto eto. Abụọ kayaks bụ nnukwu ụzọ ị ga-eji maka oge ezumike na egwuregwu. Inflatable sit-on-top kayaks na-aghọwanye ewu ewu. Kayaking na-ejide dị ka egwuregwu nke onye ọ bụla chọrọ ịnwale. Maka ndị na-enweghị ike iwepụta nnukwu ego ma ọ bụ ndị nwere ike ọ ga-abụrịrị na ha ji egwu egwu, inflatable kayak nwere ike ịbụ ebe ịmalite. Ha zuru oke, na ụdị ụdị dị iche iche dị, dị nnọọ ka ụmụnne ha ndị nwoke siri ike. Inflatable, nọdụ elu ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ n'ụdị mmiri ọ bụla. Ha na-adịgide adịgide iji banye na mmiri siri ike na-enweghị ọkpọ. Ndị nwere ụgbọ ịnyịnya nọ ọdụ na-enwekarị oche abụọ n’elu kayak kama ịnọdụ n’oche dị ka ndị kayak nkịtị. Uru dị maka ndị mbido bụ ụdị dị iche iche na usoro nke kayak enweta site na ịnọdụ ala n'elu ụgbọ mmiri ahụ. Ndị mbido nwere ike chọọ ịnwale inflatable, nọdu-nọdu ndzụ. Isoro ha mee njem dị mfe, ịchekwa ha bụ, Ọzọkwa. Chọrọ ime ka kayak mbụ gị nwee ahụmihe kachasị mma ọ nwere ike ịbụ. O yikarịrị ka ị ga-ahụ egwuregwu ahụ n'anya ma ọ bụrụ na ị nwere akụrụngwa kachasị mma. Inflatable, ụgbọ ịnyịnya nọ ọdụ n'elu nwere uru, gụnyere nkasi obi na eziokwu na ị nwere ike inwekwu obi ike mgbe ị nọ n'elu, kama n'ime, the kayak. Brandsdị ndị kachasị dị ka Hobie Cat na Coleman nwere kayaks a na-apụghị imeri emeri, ya mere ịdị mma agaghị enwe nsogbu ọ bụla. Akwa maka ndị mbido – Inflatable Sit-On-Top Kayak
Ndụmọdụ Maka Chohọrọ A Knife N'ihi Dị Iche Iche n'èzí Sports, Nkebi 1
Onu ogugu di iche iche di iche iche di na ahia. Ọ gwụla ma ị maara kpọmkwem ihe ị ga-achọ na ihe ị chọrọ, ịhọrọ ezi mma nwere ike ịbụ ihe na-agaghị ekwe omume. Ma oburu na ichoro ntuziaka n’isiokwu a, ị ga-enwe ike ịhọrọ mma nke dabara na mkpa gị n'ụzọ zuru oke. Ihe mbụ ị ga - ekpebi bụ ihe ị ga - eji mma mee – ọ ga-abụ maka ịdị ndụ nke ịma ụlọikwuu, ịchụ nta, agbachitere ma ọ bụ ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ? Ozugbo i kpebiri ihe omume ị na-eme atụmatụ iji mma, ị nwere ike ikpebi ụdị njirimara ịchọrọ mma. Ọrụ ọ bụla a na-eme n'èzí chọrọ otu atụmatụ. Lee ụfọdụ ihe ndị a na-eme n'èzí, yana atụmatụ ndị ị tụrụ aro ị nwere ike ịchọ. Chụ nta: Mma ịchụ nta ga-enwe ọdịdị agụba dabara maka anụmanụ anụ ahụ. Ogologo mma ahụ ga-abụ nke kachasị kpebisiri ike site na egwuregwu ị na-achụ nta. Gbọ mmiri: Mma maka ịnya ụgbọ mmiri ga-adị mkpa ka ọ bụrụ igwe anaghị agba nchara, iguzogide mmebi. Mma kwesịrị ịdị nkọ, ma eleghị anya ị ga-achọ agụba eji akwa akụkụ maka ịkpụ ụdọ. Ishingkụ azụ: I nwere ike chọọ mma abụọ dị iche iche maka ịkụ azụ – mma fillet na mma izugbe. The mma nzube ọma mma kwesịrị ịbụ obere ka ọkara na a igwe anaghị agba nchara agụba. Lanahụ: Mma eji egwu agha kwesiri ibu ibu, ezigbo ike mma. Ọ kwesịrị ịbụ nke na-eguzogide ọgwụ na nchara, O siri ike ijikwa ọtụtụ mmegbu. Ọ bụrụ na ị tọrọ atọ n'ọzara, o yikarịrị ka ị gaghị enwe ike ilekọta mma gị nke ọma, gbakwunye ị nwere ike iji ya mee ihe ị na-agaghị eme. Maa ụlọikwuu: Enwere ike ọ bụghị otu mma ụlọikwuu zuru oke. ’Ll ga-eme nhọrọ dabere na ụdị ịma ụlọikwuu ị na-eme, nakwa ihe ngwaọrụ ndị ọzọ ị nwere, dị ka mma, hụrụ, ma ọ bụ anyu-ike. Na-achọ mgbe niile ijide n'aka na mma ị ga-ahọrọ adabara ihe omume ị na-eme atụmatụ iji ya. Ndụmọdụ Maka Chohọrọ A Knife N'ihi Dị Iche Iche n'èzí Sports, Nkebi 1
Cooper Mastercraft Taia – Ihe Ha Pụrụ Inye Gị
N’ebe ahu ka I na ebuputa ezin’ulo gi maka ezumike oge ezumike a n’ebido. Ego ole ka i jiri mee nkwadebe? Ọfọn, a na-elekọta ihe niile na-arụ ọrụ maka enweghị gị. Emechiri ụlọ ahụ ma kpọchie ya; ya na ndi agbata obi ha di njikere itinye usoro mgbochi, ọ bụrụ na a ga-enyerịrị atụmatụ B ma ọ bụ C. Ihe niile dị mkpa dị mkpa ejirila ma nyochaa ugboro abụọ. Igwe gas jupụtara, agbanweela mmanụ ya na kaadị mkpuchi ya ka ọ nọrọ maka nchebe maka ebe dị mfe. Gịnị ka i mere banyere taya? Ọfọn, ihe, n'ezie. Aga m ekwenye na ị lere ha anya; ọ dịkarịa ala iji chọpụta nrụgide ikuku, ma ikekwe ọ kachasị mma ịtụle uwe ha na-egosi maka ntụgharị nwere ike ịme. Ana m akatọ? Ọ dịghị ma ọlị. Ma gịnị kpatara ya? Maka na ikwesighi ichegbu onwe gị banyere ihe ọ bụla maka na obi dị gị ụtọ na ụlọ ọrụ dị, dị ka ọla kọpa na Copper Mastercraft ha, nke a nwere ike ime ma nye anyị nsogbu. Ọla kọpa Mastercraft Taya sitere na ụlọ ọrụ na-echegbu onwe anyị banyere nchekwa nke anyị na ndị ezinụlọ anyị ihe ruru otu narị afọ. Ọ bụ Cooper nwere ụlọ ọrụ dị iche iche nke raara onwe ya nye nyocha achọrọ iji mepụta (ma nwee ihe ịga nke ọma na egwu na-egosi na ha kere) nke kacha mma taya enwere ike. Ya mere, anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị ma ọ bụrụ na a nwalere taya ezinụlọ anyị na-agba nke ọma iji mesie obi ike imegide ntụpọ na-enweghị isi. Ma ọ bụ mgbe anyị rutere na nkọ ahụ dịka anyị na-aga n’ugwu, ọ dịghị anyị mkpa ikwe ka obere ụjọ banye n’isi anyị na-eche ma taya ahụ abụrụla nyochara maka traction ya. N'ihi na, na Cooper Mastercraft Taia abụrụla. Ya mere, anyị nwere ike isi na-aga na oge anyị na bask na ntụrụndụ na-echegbu onwe free oge, n'ihi na Cooper Mastercraft ga-eweta anyị ebe ahụ. Ọ bụ naanị ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ichegbu onwe anyị. Cooper Mastercraft Taia – Ihe Ha Pụrụ Inye Gị
Azụ UgoEasy – Gwa Gị Ihe Na-aga n’okpuru Yourgbọ Gị
Were ya na ị ga-enwe akụkọ ga-agwa gị ma ị ga - ejide azụ ọ bụla, tupu ị kwụsị ụgbọ mmiri ahụ. Ya na Azụ UgoEasy 2 nke ahụ bụ naanị ihe ị nwere, na ngosipụta ya doro anya na-agwa gị ihe na-eme n’okpuru ụgbọ mmiri gị. Nnukwu azụ azụ ugo bụ ụdị ngwa ọrụ ịkwesịrị ịnwe n'ụgbọ mgbe ị na-apụ ọdọ mmiri. Ya bụ azụ azụ azụ zuru oke iji nyere gị aka ịhụ ọrụ azụ n'okpuru ụgbọ gị. Ọ dị ka inwe ihe ọmụma banyere ebe ịkwụsị na azụ. Ọ ga - enyere gị aka ịmasị ndị enyi gị site n’inyere gị aka iwebata ngwa nju oyi nke azụ azụ oge ọ bụla ị na - apụ. Ndị a bụ atụmatụ ugo FishEasy 2. Ihe niile na-amalite site na ngosipụta nke anụ ọhịa anọ. Ihe ngosi ihu na ihu elu 240×160 Mkpebi na-enye ezigbo nha ihuenyo na nkọwa niile ịchọrọ maka ihe ịga nke ọma n'ịchọta azụ gị. Nke ahụ bụ, ọ na-enye gị ohere ịnweta nkọwa doro anya nke ihe dị n'okpuru. Nkọwa dị elu na-enye ohere maka foto doro anya ka ị wee nwee ike ịhụ ihe sonar na-ewetara gị. Inwe ihe a doro anya na-enyere aka ime ka ịmara ebe azụ dị! Sonar dị na Eagle FishEasy dịkwa mma. Get nweta ike omimi nke 800 ụkwụ na 1500 watts nke ike. Ogbu mmiri a dị mma maka ọdọ mmiri ọ bụla etinyere. Ọ nwere 60 ogo oke nyocha ike azu. Nke a pụtara na sonar dị oke mma iji hụ ụfọdụ ihe pere mpe n'okpuru na gburugburu ụgbọ mmiri gị. Nke a na-enye aka ịmata ebe ị ga-atụba ya na ịmata ihe idide azụ gị kwesịrị ịdị. Ihe ndị ọzọ na-eme ka agụ nnụnụ ugo FishEasy dị ukwuu gụnyere teknụzụ a maara dị ka FishReveal na HyperScroll. Ihe ọ bụla na njirimara ndị a dị mma. Ngosipụta Azụ na-enye gị ohere ịhụ azụ zoro ezo na ntụpọ elu ma ọ bụ na ahịhịa dị n'ala. Na-enweghị nke a, i nwere ike ileghara azu anya na-eche na o nweghi ihe ị ga-ejide. HyperScroll na-enyere gị aka ịhazigharị ntọala gị ka ọ dabara n’ihe ị chọrọ. Na, ị ga-enweta Grayline nke na - enyere gị aka ịhụ azụ nke ga - aghọrọ na ala. Onye ọ bụla n'ime njirimara ndị a na-enye gị ohere ịchọta azụ gị oge ọ bụla ị nwara. Azụ UgoEasy 2 juputara na njirimara nke gha eme gi onu ochi! Azụ UgoEasy – Gwa Gị Ihe Na-aga n’okpuru Yourgbọ Gị
Gamertestingground.com Nyochaa – Ọ Dị Mma Ka Ọ Dị Njọ?
Ekpebiri m ide nyocha a nke GamerTestingGround mgbe m hụsịrị ihe ndị otu na saịtị ahụ nwere ike ime maka ndị egwuregwu egwuregwu vidiyo. Na-atụ anya, mgbe m gụsịrị nyocha a dị mkpirikpi, ị ga-enwe ezi echiche nke ihe ị ga-atụ anya na ị ga-esi na ịkwụ ụgwọ maka otu ma nwee ike ikpebi ma ọ bara uru ego gị. Mgbe m nuru na onwere webusaiti kariri igosiputa gi otu esi eme $120 na oge awa na-egwu egwuregwu vidio n’elu ihe ndina m, Echere m na ọ ga-adị oke mma ịbụ eziokwu. Echere m, onye ndụmọdụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị m agwaghị m na ụdị ihe ahụ bụ nhọrọ ọrụ. Mgbe m lere anya n’ime ebe nnwale ịgba chaa chaa, Achọpụtara m na ọ bụ ihe ziri ezi. Dị ka ọ na-enyo, ị nwere ike ịme ọtụtụ ego na-anwale egwuregwu vidio. Ọ ka mma, nke ahụ bụ naanị ọnụ mmiri iceberg. Mgbe ị na-eche banyere ya, ihe niile bara uru. Ndị na-ekesa egwuregwu vidio chọrọ ijide n'aka na ngwaahịa ikpeazụ nke kụrụ ụlọ ahịa enweghị ọghọm. Ndị mmadụ na-mmemme ma mepụta egwuregwu abụghị ndị egwuregwu n'onwe ha, ma ya mere, ha kwesịrị outsource ahụ n'ezie egwuregwu na-akpọ ndị ọkachamara. Y’oburu n’egwu, onye ọ bụla nwere ike ịbụ pro! Nke a bụ ebe Testgba Ule Gamer batara. Ihu ọma, ị na-akwụ ụgwọ maka otu (n'ezie oké ọnụ, N'agbanyeghị) na ị na-enweta a ndu na-agwa gị onye na-ego ọrụ. N'oge na-adịghị, ị ga-anọdụ n’ihe ndina gị na-egwu egwuregwu ụbọchị niile! A hapụghị ụfọdụ n'ime ha, gbakwunyere na ị nwere ike nweta akwụkwọ vidiyo n'efu, ịnweta koodu aghụghọ na ọkwa nzuzo. Ga-enwetakwa ezigbo ahụmịhe na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ama ama na ị nwere ike itinye na mmalite gị! O doro anya, Ana m akwado ịbanye n'obere ule nke ndị na-egwu egwuregwu ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị obere igwu egwuregwu vidio maka ego ọzọ. Ezie na ọ na-ada ụda nke ọma ịbụ eziokwu, ọ bụghị. Ọ ga-abụrịrị ọrụ kacha jụụ n’ụwa! Gamertestingground.com Nyochaa – Ọ Dị Mma Ka Ọ Dị Njọ?
See Longer draịva – Nke a bụ otu
Iji merie ogologo draịva bụ nrọ nke golfer ọ bụla na mbara ala! Ọbụna ndị egwuregwu ọkachamara chọrọ ịkụ draịva ogologo. Enwere bọmbụ anwansi? You maara n’ezie ihe ọ na-ewe iji meziewanye ịkwọ ụgbọala gị n’ụzọ dị egwu? M ga-aza azịza mbụ gị ga-abụ onye ọkwọ ụgbọala ọhụrụ na $500. M ziri ezi? Ọ bụrụ na ọ bụghị onye ọkwọ ụgbọala na-anakwu nkuzi golf. Enwere m ọkụ karịa? Ọ bụrụ na mabatabeghị right’itinyekwu bọọlụ na nso? Enwere m ọkụ na-ekpo ọkụ ma? Igodo nke ịkụtu draịva toro ogologo bụ ọsọ klọb na kọntaktị bọọlụ siri ike. Ọ bụ ya! O yiri ka odi nfe zuru oke? Ọ bụghị! Nanị ụzọ iji melite ọsọ ọsọ isi isi ike bụ ịnwe ezigbo ike yana mgbanwe na mpaghara gị. Nke a bụ mpaghara ahụ gị nke na - emepụta torque na azụ azụ nke emere na mmetụta. Ugboro ole ka ị gbalịrị ịgbasi ike na bọl enweghị ebe ọ bụla? Anọ m ebe ahụ. Ugboro ole ka ‘ị chọghị ịma’ na mberede, bọl ahụ rụsịrị n'ụgbọ klọb. Na otu time’you nọrọ jụụ ma eleghị anya ị mere nnukwu azụ, ya mere na-emepụta ọzọ torque (ume). Mana m ga-ekweta na ị nwere ike ikwugharị nke na-abụghị gị? Nke ahụ bụ n'ihi na ahụ gị nwere adịghị ike anụ ahụ nke na-agaghị enye gị ohere ịmegharị nkwado zuru oke ma chekwaa ume ahụ. Site na itinye ikike ntụgharị na mmegharị a na-eme maka mgbatị golf, ị ga-ahụ mmụba dị egwu na isi ọsọ na anya. Ahụla m mmụba nke 50 yaad! Ugbu a ọ bụrụ na ị na-eburu ya 260 tinyere yaad, ị gaghị ahụ a 50 yad abawanye, ma ị pụrụ n'ezie ịhụ a 30 yad abawanye. Ọ bụ ihe niile gbasara ahụ gị ịmegharị ntakịrị ka ọ dị mma n’ime gọọlfụ gọọlfụ gị. Yabụ oge ọzọ ị ga - enweta mkpali iji meziwanye ọkwọ ụgbọala gị'echiche nke ịrụ ọrụ na ahụ gị'na-agbanyekwu ike. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ iti ogologo draịva! See Longer draịva – Nke a bụ otu
Gịnị Bụ Ma E nwere a Bass Fishing Nzuzo?
Ihe mbụ kachasị mkpa ị chọrọ ịma gbasara nzuzo ịkụ azụ bụ na ọ nweghị ezigbo ihe nzuzo maka ịchụ akụ ma ọ bụ ụdị azụ ọ bụla.. Naanị ihe nzuzo azụ bass bụ na ọ nweghị nke ọ bụla. Ọ bụ eziokwu… Ọ dị mkpa ịmata ụdị bass ị na-akụ azụ. Enwere ụdị bass dị iche iche dịka ọmụmaatụ enwere nnukwu bass ọnụ, obere ọnụ bass, bass ọcha, mmiri bass ọhụrụ na na. Ozugbo ị chọpụtala ụdị bass ị na-egbu azụ mgbe ahụ ị nwere ike ịga n'ihu na azụ azụ azụ azụ na-adịghị mma. PSST… Nke ahụ bụ otu n'ime obere ihe nzuzo ịkụ azụ… Maka edemede a, m ga - akụ azụ, nnukwu ọnụ bass. Ihe nzuzo azu maka nnukwu onu bu ima ihe o rie na odidi okike ya. Nke ahụ nwere ike ịdị ka ajụjụ siri ike ịjụ onwe gị mana azịza ya dị mfe: Nnukwu ọnụ na-eri ihe niile site na ijiji ruo obere nnụnụ, ihu ọma ma ọ bụrụ na ọ kụọ mmiri nnukwu ọnụ ga-eri ya. Typedị nzuzo ịkụ azụ bass – bait ị na-eji dabere na angler, ọ bụrụ na ịchọrọ iji ezigbo nri azụ mgbe ahụ ndị na-agba abalị n'abalị dị iche iche maka bass mana ọ bụrụ na ịchọrọ nri nri azụ, m ga-akwado iji ikpuru plastik na Texas rig. Achọpụtala m na nke a baara m uru. Ugbu a ị chọpụtala ụdị ụdị bass ị na-akụ azụ na ụdị ụrà ị chọrọ iji na-aga n'ihu. Nzuzo ozo nke bass bu: ebee ka ijide?. Nwere ike ịga ebe ọ bụla ị ga - ejide ọnụ. Nwere ike ịga iyi, ọdọ mmiri, osimiri ma ọ bụ ọdọ. Ebe ị na-aga nnukwu ọnụ bass na-ahụkarị n'akụkụ mmiri n'okpuru ahịhịa, osisi na / ma ọ bụ aka na ụkwụ, ma ọ bụ n’akụkụ nkume. A naghị ahụkarị ha n'etiti ọdọ. Ọzọ nzuzo bass nzuzo nke dị mma mara bụ mgbe oge kachasị mma nke afọ iji jide bass bụ. Nwere ike ijide nnukwu ọnụ oge ọ bụla n'afọ, mmiri, ndaeyo, oyi, daa ya adighi mkpa; ya niile dabere na ihe angler masịrị. Ọdịda na-amasị m n'ihi na bass na-eri ihe niile ha nwere ike ime ka ọ maa abụba maka ogologo oge oyi. Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ịnọghị na steeti ebe ọdọ mmiri na-akpụkọ mgbe ahụ ekwere m na oge kachasị mma iji azụ bụ mbubreyo oge ọkọchị ma spam gafere. Nke ahụ bụ ihe gbasara ya. Ugbu a na ịmara ihe nzuzo bass na-akụ azụ, chọpụta ihe na-arụ ọrụ maka gị n'ihi na ihe kacha mma bass ịkụ azụ nzuzo bụ nke ị na-na nzuzo… PSSST…. Gịnị Bụ Ma E nwere a Bass Fishing Nzuzo?
Ga nke Ọma Site Na Ndụmọdụ Ahụ
Site na aha anyị ị ga-ekwenye na nke a bụ ndụmọdụ, biko obi sie gị ike na ọ bụ ihe karịrị nke ahụ, isiokwu anyị gbasara mkpali. Ọ bụchaghị mkpali ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ahụike. Iji mee ihe ahụike ka ịkwesịrị ịnwe aka na nke ahụ bụ ihe anyị na-atụ anya ịkwalite site na ịde ebe a taa. Enwere ọtụtụ ụzọ iji nwee ọganiihu na ahụike ọ bụghị mmadụ niile na-akwado mmadụ niile, jogging si maka ndị nwere ikpere ọjọọ, na-egwu mmiri maka ndị nwere ihe nfụkasị na chlorine, ị nwere ike ịhụ ebe anyị na-aga, Ọ bụrụ na ịnweghị mkpali ị ga-ahụ ihe ngọpụ iji dị nwayọ ma daba na nsogbu. Onye na-ede ebe a nọ n'ụdị nsogbu a wee were ọtụtụ afọ ịhapụ onwe gị wee chọta nnwere onwe iji nwee ihe ịga nke ọma ma ghara ịkwado gị ọdịda gara aga ma ọ bụ enweghị ike ịga n'ihu n'ime ịdọrọ gị na ala nke olulu. Otu n'ime ụzọ kachasị mma bụ ịbanye na usoro ma bido, mmalite ahụ dị mma!!! n'ezie iwere nzọụkwụ, ọ bụrụ na ị naghị eme ihe ọ ga - ekwe omume ịnweta ike dị mkpa iji gaa n'ihu. Easyzọ dị mfe ma dịkwa mfe ịmalite bụ ịnwale ịkpụ ahụ, naanị site n'ụdị egwuregwu a ọ nwere àgwà niile dị mkpa iji kpụzie uche gị ka ị nwee echiche na-aga nke ọma. Ihe ọ bụla kekọtara ya na ụlọ ahụ gbasara ihe mgbaru ọsọ na iru ihe mgbaru ọsọ dị iche iche oge ọ bụla mgbakwunye 10 paụnd ebe a na mgbakwunye 10 reps e, na nri ị na-mgbe niile na-aga otu nzọụkwụ nso na ihe mgbaru ọsọ. Ọganiihu na azụmaahịa na ndụ bụ maka ebumnuche, ị gaghị enwe ike ịtụle ọganiihu belụsọ ma inwere ihe ịchọrọ. Yabụ ihe anyị na-anwa itinye n'ime obere edemede a bụ echiche bụ na ụzọ kachasị mma iji nwee ọganiihu na ndụ na azụmaahịa bụ ịme ihe ma ọ nweghị usoro ịmezi ihe ịga nke ọma ka mma mgbe ahụ ahụ ga-esi na shea gị gaa mgbatị mpaghara gị taa. Ga nke Ọma Site Na Ndụmọdụ Ahụ
Lykụ azụ? Mgbe ahụ Gịnị?
Kemgbe ọtụtụ afọ, ofufe ịkụ azụ ejiriwo ọtụtụ ndị na ezinụlọ nwee mmasị. Enweela ọtụtụ ọdịiche na echiche nke ọtụtụ ndị ọkachamara ịkụ azụ na-azụ azụ ma ọ bụ ndị na-akụ azụ na-atụnye na oge. Ebe ọ bụ na ịkụ azụ bụ ọrụ dị mma na oge ijikọ ezinụlọ niile, O doro anya na ọtụtụ ndị na-enwe mmasị na ntụrụndụ na ụdị ntụrụndụ na-ewu ewu. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ bụ ofufe ịkụ azụ? E nwere ihe ọzọ iji fee azụ karịa naanị iguzo n'ime mmiri ma na-eche maka ọkachamara ga-etinye gị na azụ gị. O kariri oge ichere, oyi ma ọ bụ ihu igwe dị ọkụ ma ọ bụ oke mmiri ị na-abanye; ọ bụ ịdị jụụ onye ọ bụla na-enweta na obi ụtọ a na-apụghị ịgbagha agbagha mgbe ị na-ejide azụ maka oge mbụ. Ewezuga ihe dị iche iche dị mkpa ịchọrọ iburu n’uche ma cheta mgbe ị na-akụ azụ, enwere ụfọdụ ndị ọzọ ịchọrọ iburu n'uche. Ihe ndị a nwere ike ịdị nfe mana ọ na - enyere ọtụtụ ndị ọkụ azụ ejirila rụọ ọrụ a. Gini banyere iji azu na umu azu, ị jụọ. N'ezie, i nwere ike ịkpọtara ụmụ gị. Ọ bụ na anyị ekwughi na iji azụ azụ bụ ohere zuru oke iji wusie mmekọrịta gị na ezinụlọ gị dum? Kidsmụaka abụghịkwa otu. Cheta na, nchedo nchekwa dịkarịsịrị mkpa mgbe ị na-egbu azụ na ya na ụmụaka, ikwesiri okpukpu abuo. Ma esisila ha ike karịsịa mgbe ha gosipụtara mkpali na-ejizi mkpara na akara nke aka ha. Ka emechara, ha bu umuaka na ndi na-agaghi enwe obi uto inweta ha nke mbu? Hapụ nrụgide ahụ ma echefula ka gị na ụmụ gị na-ekpori ndụ. Ihe kacha mkpa mgbe ofufe ịkụ azụ bụ mgbe mgbe ị na-eme ka ihe niile dị n'okpuru, ị ga-ekpori ndụ ma nwee oge ọ bụla ma gị na ụmụaka nọrọ ma ọ bụ na enweghị ha. Oh, echefukwala ịse foto ndị ahụ! Lykụ azụ? Mgbe ahụ Gịnị?
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịlụ gị ọgụ!
ỌR COM AHÝ Have hụtụla ime ihe ike ma ọ bụ onye nwe 'ihe ’? Naanị chọọ google maka “agha n'okporo ámá agha” – “agha nwere” Lelee ihe nkiri ndị ahụ ma maa jijiji!!! Kung Fu, Ịkụ ọkpọ, ịgba egwú, balley, abaghị uru? Kedu ihe ị ga-egosipụta nke onye na-awakpo gị ma ọ bụrụ na ụbọchị ahụ abịa? Nwere ike itu ntụmadị ma ọ bụ kwụrụ otu ebe n’otu ụkwụ? nwere ike ị na-eme a gburugburu-ụlọ ma ọ bụ ọbụna na-enye a igba na ikpere? Enweela mgbe nchikota, usoro ma ọ bụ ụdị? Taa anyị dị umengwụ, ikekwe abụba kwa.. Gaa lee anya n’enyo ma wụfee nkeji iri, wee lelee onyonyo gị ọzọ na gịnị ka ị hụrụ? Enwere m ike ikpe na m nwere ike ịbụ ọkara ike na ntachi obi 10 afọ ndị gara aga, Kedu maka gị? A mara MARTIAL Knowledge a mara agha dị ka – 1 : nke, metụtara, ma ọ bụ bụrụ onye ruru eru maka agha ma ọ bụ onye agha 2 : metụtara agha ma ọ bụ ndụ ndị agha 3 : ahụmahụ ma ọ bụ na-achọ ịlụ agha : A na-akọwa ọrụ ịlụ ọgụ dị ka: ụdị dị iche iche nke ichebe onwe, anaghị adịkarị alụ ọgụ, dabere na usoro ndị e mepụtara na China oge ochie, India, na Tibet. Okwu a bu ‘Kung Fu’ enweghị ihe jikọrọ ya na ụdị agha ọ bụla, mana ka asughariri dika ‘talent’ ma ọ bụ 'nka'. Wu Shu bụ ọdịnala nke okwu a na-ejikarị akọwa omenala ndị China, ọ bụ ezie na nkọwa ndị ọzọ yiri Kuo-shu, Kuo-chi, Chien-shu na Tao-fa ejirila oge ụfọdụ. (Wu Shu bụ okwu mbubreyo eji eme ihe eji eme ihe eji mara China site n'aka ndị Republic of China). Ọ bụrụ na ịmụbeghị ọgụ mara, ịmara banyere ha yikarịrị ka ọ ga-amalite na fim Bruce Lee wee gwụchaa ihe ngosi nka nke Matrix. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, ị nwere ike ghara ịghọta site na ihe ị tụtụkọtara onscreen na enwere atụmatụ 200 iche iche nke karat nkà, na n'ime ndị a, ọtụtụ puku ụdị dị iche iche. Karate, judo, kung fu, na tae kwon do so ná ndị kasị ewu ewu na nke a maara nke ọma na karat na U.S., mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ. N'agbanyeghị ọtụtụ usoro nke karat na ụdị, ọtụtụ n’ime ha na-ekerịta usoro ndị ọzọ, ya mere ha nwere ike ịhazi ya gaa na ngalaba sara mbara nke na-eme ka nghọta dịrị. Wayzọ bụ isi e si ekewa nka mara mma bụ site n'ụzọ bụ isi ha na-eji eme ihe: na-egbu ma ọ bụ na-alụ ọgụ. N'ihi karate, judo, kung fu, na tae kwon emewo ka ọ pụta ìhè karịa ụdị ndị ọzọ n'ọdịnala ndị a ma ama, site n'ihe nkiri gaa n'ihe omume egwuregwu, ọtụtụ ndị mmadụ na-eche n'ụzọ hiere ụzọ na ọkaibe niile n'ọgbọ agha bụ ndị Eshia. N'ezie, ọdịbendị dịgasị iche iche n'akụkọ ihe mere eme site na Europe, Africa, Amerika, na Middle East enyekwala ụdị ejiji aka ha. Ma ọ bụ nchikota triangles na obere okirikiri dị ka a pụrụ ịhụ na ọnya China, nkwojiaka nkpuchi ma ọ bụ ntinye Aikido na njedebe. You makwa ọdịiche dị n'etiti kung fu na karate? I chere na nku nku bụ nri China? Stylesdị dị iche iche nwere ike ịdị na-emetụta ụdị ma ọ bụ geometry – square, triangles na gburugburu. MARTIAL TRAINING TO LIVE Ọzụzụ siri ike..n'ezie siri ike. Ihe kachasị sie ike bụ ịmalite na ugwu ugwu ya dị mfe site n'ebe ahụ. Ihe ị chọrọ bụ igwe ọgụ karat – ihe ọhụrụ na ihe na-atọ ụtọ ịhapụ gị na ịnyịnya ibu gị. Onye ọ bụla maara onye maara otú e si alụ ọgụ – na ọkpọ, mma, ngwa agha, egbe, kenkwucha, enweghị uche, ihe ọ bụla ma Bido! Ma ọ bụ chọta ụlọ akwụkwọ mara nka na mpaghara gị. Gaa na akwụkwọ ekwentị dị na mpaghara wee chọọ kung fu ma ọ bụ karate. Kpọọ ha, soro ma obu buru nwa gi. Kedu ihe dị mkpa ugbu a bụ ime ihe, bido ime mgbatị, banye na ndinyanade mbịne, igbe onyinyo, mgbe ahụ kwụpụ ma zụọ ike. Ihe ize ndụ ya dị N'ebe ahụ Ọ dị ize ndụ n'ebe ahụ na karịsịa maka gị.. Onye iro nwere ike ịbụ n'ọnụ ụzọ nke ọzọ na ị maghị ya mana ị ga-enwerịrị obi ike. Kedu ihe ị ga - eme ozugbo ị hụrụ ụfọdụ ime ihe ike ma ọ bụ nwee ụjọ ma ọ bụ njọ karịa n'ihi na ị natara ọgba ma ọ bụ eze – ị zoo n'ụlọ gị? TV taa na-atụ ụjọ nke ọtụtụ mmadụ n'ihi na ọ na-akwalite ime ihe ike ma na-eme ka ndị dị nwayọọ n'obi bụrụ odo na ụjọ. Ihe ize ndụ dị taa nwere ike ọ gaghị edocha gị anya mana ị ga - eme ka ihe mmetụta gị ma ọ bụ mee ka ị kụrụ na - ahụghị ya na - abịa. Know mara na e nyere ọnọdụ ịbụ dike na ịkwụsị mpụ, iyi ọha egwu ma ọ bụ ime ihe ike ị ga-enwe ike ịrịgo ma ọ bụ chụwa ha wdg – ma ọ bụ ma eleghị anya, ị ga-ama jijiji ma ọ bụ bụrụ onye ahụ. Ndi gi na ujo nke ndu? You nọ n’ebe ahụ n’etiti ya ma ọ bụ ntakịrị ihe ihere na-eme ihere ma ọ bụ ụlọ mummys boy? Nkwubi okwu bu oru Ndu adighi egwu ma obu eleghi anya, nkwenye onwe gị na asọmpi onwe gị na-eme ka ụjọ jide gị. Bido na-arụsi ọrụ ike ma na-ele anya, wee họrọ ma sonye n'ime ihe ọ bụla naanị ya na igwe ọzụzụ nka ma ọ bụ gaa dojo. Ndụ adịghị atụ egwu mana ikekwe enweghị ụkọ ọrụ gị, nkwenye onwe gị na asọmpi onwe gị na-eme gị ụjọ. Ọ bụrụ na ị naghị achọ ihe ị na-ahụ n'enyo, na-atụ egwu ịgbada n'okporo ámá gbara ọchịchịrị, na-atụ ụjọ maka esemokwu nwere ike wee zụọ ugbu a. Bido na-arụsi ọrụ ike ma na-ele anya, wee họrọ ma sonye n'ime ihe ọ bụla naanị ya na igwe ọzụzụ nka ma ọ bụ gaa dojo. Anyị niile agaghị abụ Bruce Lee mana ị chọghị ịbụ akpa mmetụta mmụọ na nke anụ ahụ ị na-eme? ỌZỌ NA-AZSWZA Martialarm bụ naanị ọzụzụ nkuzi ọgụ mara mma nke ga-enyere gị aka imezu ọmarịcha ọzụzụ ọzụzụ nka gị niile na kung fu, karate, chọrọ afo, jeet kune do, tae kwon do, kempo na ndi ozo. The martialarm adịghị ka yiri dummies ọzụzụ: E jirila dummy osisi mee ọtụtụ narị afọ dị ka igwe eji akwọ ọzụzụ. N'oge dịkọrọ ndụ, enyerela ha ka ha nweta ha na ihe di iche iche dika ihe ndi ozo. Ma, ha niile nwere otu ihe n'ozuzu ha: Ha anaghị agbanye ma ha niile na-agbanwe agbanwe. Ihe na-efu osisi na-efu narị kwuru narị dollar oge niile mana ọ ka na-emepụta naanị iji kpoo ọkụ gị ma bulie nkenke gị. Onaghi eme ka mbuso agha gi na akuko onye gi na onye nwere ike ime. Yabụ ezie na ị nwetara ọzụzụ ikwughachi ụzọ dabara adaba, nke a na-anakwere maka imezu ihe ndị bụ isi, ọ nwere ike ịbụ ihe siri ike iji ma na-atụ egwu ngwa ngwa. Ihe kpatara na ndi nka nka ji eme ka ndi agha di nma karie ndi ozo dika ndi agha, anyị niile maara nke a. Onye nkuzi nkuzi nka agha gi nwere ike iju ya isi. Ewoo, enwere nani otutu klaasi n'izu ma nke a puru ime ka imuta akwukwo gi na isi gi. Chọrọ imeziwanye – ngwa. Ma ị na-achọsi ike itinye oge gị na ọzụzụ ụlọ. Mana ọzụzụ naanị gị nwere ike iburu gị ugbu a n'ihi na ọ nweghị mmekọrịta ya na naanị onye inyeaka nwere ike inye. Ruo ugbu a! Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịlụ gị ọgụ!
Chọpụta 2 Nyocha uru – Ọ Dị Mma Ka Ọ Dị Njọ?
Mgbe inwetara ohere puru iche ihu sistemu n’omume, Ekpebiri m ide ihe a 2 Nyocha uru. Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere John Anthony ma na-eche na ị nwere ike iji puku dollar ole na ole kwa ọnwa, ị ga-ahụ nyocha a nke mmasị pụrụ iche. Na-atụ anya, mgbe ị gụchara ya, ị ga - enwe ezigbo echiche ihe ị ga - atụ anya n’agha ga - esi n’aka Sure 2 Uru, ma ọ bụrụ na ọ bara uru oge gị na itinye ego gị. N'oge a, ọ dị ka mmadụ niile ọ bụ ọkaibe n’itinye nzọ na-emeri n’ọsọ ịnyịnya. Site na Deede Albert gaa na nwa okorobịa ahụ na-azụ nkịta nri n'ụlọ ahịa m, onye ọ bụla nwere ihe nzuzo ha dị njikere ịkọrọ gị mgbe obere mint juleps dị ole na ole gafere. Ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma na ịkụ nzọ, Otú ọ dị, ha agaghị arụ ọrụ na nri nkịta ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala a 1992 Ford Windstar (Uncle Al!). John Anthony dị iche, ọ bụ ezie, na nke a bụ ya mere m nwere mmasị ịmụtakwu banyere ya Sure 2 Usoro uru. Anthony na-arụkarị ọrụ karịa $3,000 Kwa izu ịkụ nzọ na ịnyịnya, n'iji ngwanrọ ya gosipụtara na usoro ịkụ nzọ. Otu nwoke na-eme ihe n'eziokwu nke mepụtara usoro mmeri nke na-ebute ego na-enweghị ụtụ isi maka ụmụazụ ya niile na-eji ya, Anthony si n’aka 2 Usoro ịkụ nzọ bara uru adịghị ka ihe ọ bụla dị na ahịa taa. Kwụpụ site nzọụkwụ, Chọpụta 2 Uru na-agagharị site na ịmegharị ego ịkwa emo dị ka obere 30 nkeji kwa ụbọchị. Ihe kachasị mma banyere sọftụwia ya na ndu ya bụ na ọ bụ 100 pasent nke nkwa iji mee gị ego. Gbalịa ịchọta ebe ọ bụla ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ! Enweghị m ike ịja abụ otuto nke Sure 2 Erite uru zuru oke. Ana m akwado Anthony na Sure 2 Uru onye ọ bụla m maara bara uru na ịgba chaa chaa, m na-atụ aro ka ị leba ya anya. Ka emechara, ị nweghị ihe funahụrụ gị. Chọpụta 2 Nyocha uru – Ọ Dị Mma Ka Ọ Dị Njọ?
Mpaghara Nkume Nkume na KY ‘ Kentucky
Ke akpa ilekiri, ịrị ugwu na Kentucky nwere ike iyi ezigbo echiche. Na ntụle! Osimiri Red River na-enye nnukwu ugwu ịrị ugwu na KY. Mpaghara Nkume Nkume na KY ‘ Kentucky Emi odude ke Daniel Boone National Forest, Oke Osimiri Uhie Red Ka ukwuu karịrị 26,000 acres. Osimiri Uhie na-agba ihe dị ka 20 kilomita site na mpaghara ahụ. Mpaghara osimiri ahụ jupụtara na ohere ịrị ugwu na mgbidi nwere ọtụtụ oghere, okwute na ịrị elu ụlọ iji nwalee usoro gị kwụ ọtọ. Enwere ike iji ụgbọ mmiri ruo Osimiri Uhie dị ihe dị ka otu awa site na Lexington, Ky. Zọ ụkwụ na ịma ụlọikwuu bara ụba na mpaghara ahụ, otú i nwere ike ime ka a izu ụka nke njem gị. A na-ahapụ ịrị ugwu site na ọtụtụ ọmarịcha, mana mpaghara ole na ole anaghị egbochi. Nwere ike ịjụ ndị ọrụ nchekwa ọhịa maka ndepụta, mana a na-egbochi gị ịrị elu ma ọ bụ ịdata na nke ọ bụla. Ọzọkwa, ụzọ niile edogoro ma machibido ndị na-arị ugwu ibido ụzọ ọhụụ na-enweghị ikike iburu ụzọ site na ndị ọrụ nchekwa. Ndo maka downer, mana ị chọghị ijide gị. Mgbe ịrị ugwu na Ugwu Red River, enwere mpaghara ole na ole na-enweta mkpịsị aka elu. Maka omenala ịrị, mpaghara ndị a na-eme isi mkpịsị aka: 1. Ugwu Pebble 2. Ugwu Sky Bridge 3. Ebe e wusiri ike 4. Long Wall Ebe ndị a niile nwere epic ịrị ụzọ gasị na ratings niile nke ọma n'elu ise. Climgba egwuregwu na-eweta nsogbu dị iche iche na mpaghara Osimiri Uhie na-ezute ya. Mpaghara ndi ozo gunyere: 1. Global Village nwere ọtụtụ ịrịgo 2. Mgbidi ndị agha 3. Okporo ụzọ 4. Ugwu Pebble 5. Sky Bridge Ridge Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na mpaghara, ebe kacha mma ị ga-akụ bụ Pebble Beach na Sky Bridge Ridge. Onye ọ bụla na-enye ọtụtụ ugwu, nke na-enye gị ohere kachasị mma ịnwale usoro gị ma were obere nsogbu. E nwere mpaghara ndị ọzọ na Kentucky na-enye ugwu ịrị elu. Osimiri Uhie, Otú ọ dị, bụ eze ugwu mgbe ọ na-abịa ebe ịrị ugwu na KY. Mpaghara Nkume Nkume na KY ‘ Kentucky
Ndụmọdụ Azụmaahịa Hawaii
Ohere iji banye n'ụgbọ mmiri dị njikere ijide azụ, na-ekpori ndụ ebe mara mma, na mmekọrịta enyi na ndị ọrụ ụgbọ mmiri bụ ahụmịhe kachasị mma n'ịkụ azụ ị nwere ike ịchọta. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere gị aka ịnụ ụtọ ịkụ azụ. 1. Jiri amamihe họrọ ụgbọ mmiri. Otu ụgbọ mmiri nke na-egbo mkpa gị na ebumnuche gị banyere ihe ị ga-eme azụ ị jidere bụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ ụgbọ mmiri maka njem njem ụgbọ mmiri nke Hawaii. 2. Họrọ agwaetiti kwesịrị ekwesị na Hawaii nke na-ezute oge ịchọrọ nke njem njem. Maka njem dị mkpumkpu, họrọ agwaetiti na Hawaii nwere mmiri miri emi n'akụkụ oke osimiri. Agwaetiti ndị a dị mma maka njem dị mkpirikpi n'ịkụ azụ ebe ịkụ azụ ga-ewe oge. 3. Tụlee iweta ihe, sịga, ice na mmiri ọhụrụ. Kwenye na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na ha ga-enye ihe ndị a. Tackle bụ usoro pulleys na ụdọ ndị agbakọtara iji kwado usoro maka ịkwado na ịdọpụ. Idide azụ bụ maka ịdọ azụ. Ice bụ maka idebe azụ azụ dị ọhụrụ n’oge njem ahụ. Mmiri ohuru bụ maka akpịrị ịkpọ nkụ n'oge njem azụ. 4. Yiri uwe mara mma nke dabara maka ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ. T-shirts na obere mkpirisi bụ uwe kachasị mma eji egbu azụ. T-shirt ọzọ ga-aba uru. 5. Tụlee iweta okpu bọọlụ baseball maka shading. Nke a dị ire na ikpuchi ụzarị ọkụ nke anwụ n'oge njem azụ. 6. Weta ugogbe anya maka anwụ iji hụ azụ n'ime mmiri. 7. A na-atụ aro akpụkpọ ụkwụ ụgbọ mmiri emechiri emechi iji mee ihe. Emere ha maka idebe ụkwụ ka ọ ghara ịdị na-amị amị mgbe ihe dị mma. 8. Weta nri na ihe ọ drinksụ drinksụ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri agaghị enye ihe ndị a. Achịcha dị mma karịa iko maka ihe ọ drinksụ drinksụ. Ibe dị ka Cheetos na Doritos maka nri dị iche iche na-aga nke ọma n’osimiri. 9. Echefula iweta ọgwụ maka oké osimiri. Iji belata mmetụta nke ịrịa mmiri, were awa 8 hie tupu njem azu. Mụrụ anya ma na-arụsi ọrụ ike tupu ụgbọ mmiri ahụ apụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ga-enyere aka ghara ịnwe mmetụta nke ịba mmiri nke mmiri site na njem ịkụ azụ. 10. Rie nri zuru oke na nri abalị na obere nri ụtụtụ tupu njem ahụ. 11. Echefukwala iweta anwansi. Igwe na SPF nke 30 ma ọ bụ dị elu ka akwadoro nke ọma iji kpuchie akpụkpọ ahụ site na ụzarị ọkụ UV nke anyanwụ. 12. Kpebie tupu njem otu ị ga-esi rute n'ọdụ ụgbọ mmiri maka njem ịkụ azụ n'ụtụtụ. Họrọ ma ọ bụ iji tagzi ma ọ bụ gbazite ụgbọ ala. Iji ndụmọdụ ndị a ga-aga ogologo oge maka ịnwe ụbọchị ịkụ azụ na-atọ ụtọ. Ndụmọdụ Azụmaahịa Hawaii
Nwee oriọna oriọna maka ahụmịhe ịgba ọsọ dị mma
Ọ bụrụ n ’ị ka na-eji ọwa aka gị na ọwa ọkụ maka mkpa ọkụ gị mgbe ọchịchịrị gbara, mgbe ahụ ị na-na-efu efu na a magburu onwe ngwá ọrụ nke nwere ike inyere gị immensely ọ bụla mgbe-ọchịchịrị ọrụ. N'agbanyeghị ihe oké mma aka ẹkenịmde tọọchị ị nwere, enweghị ike iji ya tụnyere nkasi obi na ịdị mma nke oriọna LED. Ọbụna ọkụ ọkụ, ebe ha ka enwere ike na ike na ogo, ndị na-erughị adaba karịa aka-free na hassle-free Ikanam headlamps. Enweghị ọrụ buru oke ibu ma ọ bụ pere mpe maka oriọna oriọna iji mee, site na ịrụ ọrụ n'okpuru ụgbọ ala gị ma ọ bụ n'okpuru ụlọ gị gaa n'ịgba ọgba, maa ụlọikwuu, na ọbụna ịrụ ọrụ nnapụta n'abalị mgbe ịchọrọ n'ezie ka aka abụọ nweere onwe gị dịka o kwere mee. Ọkụ ndị a na-ahapụ aka gị n'efu maka ọrụ ndị ọzọ dị mkpa, na eziokwu na ị dịghị ebu ha na-eme ka ha fọrọ nke nta ka dobe-àmà. Ikanam oriọna dị elu karịa ọtụtụ ụdị isi mkpuchi ọzọ n'ihi nnukwu ọkụ bọlbụ ha na-eji. Bulbs ndị a na-enwu gbaa karịa ka bọlb ndị a na-ejikarị eme ihe, na-emenwu enwu, acha ọcha. Ha anaghị ejikwa ike ha eme ihe, nke pụtara na bọlbụ ikanam ga-agafe obere batrị ma rụọ ọrụ nke ọma ma dị ogologo karị iji nye gị ọkụ ị chọrọ maka ọtụtụ, ọtụtụ awa na oge. Akụkụ ọzọ dị mma nke oriọna ikanam bụ na ha dị ogologo karịa ọkụ ọkụ, yabụ ozugbo ị gbanyere oriọna gị ma tinyekwa batrị ọhụrụ, i nwere ike ịtụkwasị obi na narị otu narị awa nke iji oge site na bọlbụ gị. Nke a dị mma karịa ichegbu onwe gị banyere ma bọlbụ gị nwere ike ịlanarị njem ọzọ n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume iburu mapụtara mgbe ị ga-apụ n'ọhịa. Ezigbo oriọna oriọna ga-enwe eriri nwere ike idozi ya iji nyere gị aka inwe ahụ iru ala ịchọrọ iji nwee ntụkwasị obi na ọkụ gị. Oriọna oriọna gị ga-adabara gị nke ọma ma nwee ike ịnọ ebe n'agbanyeghị ihe ị na-eme, ma nwee ike iji ihe mgbatị ahụ na-etinye aka iji tinye ọkụ na ebe kwesịrị ekwesị maka gị. Gaghị echegbu onwe gị maka ịhapụ aka iji wee tọọ ọkụ ọkụ ọzọ! Ikwesighi ichefu na ogo nke oku nke na-esite na oriọna oriọna di elu karie. Ọkụ nke na-esite na ezigbo oriọna oriọna ga-acha ọcha, ma enwere ike ihu ya na onodu ufodu rue 3,000 yaad. Echegbula onwe gị nke ukwuu banyere ikpuchie nnọkọ gị niile, ọ bụ ezie. Igwe ọkụ ọkụ ga-abịa na ọkụ ọkụ iji mee ka ọkụ gị dị larịị maka ọnọdụ na ọrụ ọ bụla ịchọrọ ịhụ na ị na-ekere òkè na ya.. Ikanam headlamps zuru okè maka maa ụlọikwuu n'ihi na ha na-ahapụ aka gị n'efu maka ọrụ ụlọikwuu. Ha dị oke mma maka ịrụ ọrụ na obere oghere, nnukwu maka ihe mberede, jupụta na ojiji maka gị iji chọpụta ma ọ bụrụ na itinye uche gị na ya. ~ Abụ m Anton, 2007 Nwee oriọna oriọna maka ahụmịhe ịgba ọsọ dị mma
Ndụmọdụ Volleyball bara uru bara uru iji melite egwuregwu gị
E nwere ihe ole na ole dị mkpa nka onye ọ bụla ji egwu volleyball mara kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị na-egwu egwu, O rughi nso ka odi nkpa muta iwu ndi a, ma ọ ga - eme ka ị kachasị mma karịa ndị ọkpụkpọ niile na onye na - atọ ụtọ igwu egwu. Ihe mbu mbu ikwesiri imuta bu ka esi eje ozi. The floater ozi bụ ihe ndị bụ isi overhand-eje ozi na ndị kacha mfe ịmụta. Nzọụkwụ mbụ iji rụọ ọrụ nke floater na-eme ka ọnọdụ ụkwụ gị zie ezi. Ga-achọ iguzo, na-eche ụgbụ ahụ, n'ụkwụ gị zọkwara ije. Yourkwụ gị na-abụghị nke ogwe aka ịkụ gị kwesịrị ịdị n'ihu. Will ga-achọ inwe ọtụtụ nke ibu gị na gị azụ ụkwụ na obi ụtọ na gị na-abụghị ọkụkụ aka. Osote, gbasapụ aka gị n’ihu gị, ukem na ala ma mee ka aka ịkụ gị na ntị gị na ikpere aka gị dị elu. Mgbe ahụ, ị ​​ga-atụgharị bọọlụ ahụ ihe dịka ụkwụ abụọ n’elu isi gị na n’ihu ubu gị. Mgbe ị na-ebugharị ibu gị na ụkwụ ụkwụ gị, kụrụ bọl na ogwe aka gị gbatịrị n'ihu gị. Nke a dị mfe, mana ọ ga-ewe ọtụtụ omume iji nweta ya. Ihe omuma nke abuo nke ichoro ima bu uzo igabiga. Ikwesiri ibido na ubu obosara gi gbachapuru na ikpere gi ikpere. Mgbe bọọlụ bịara gị, ị ga-achọ ijikọ aka gị ọnụ na-eme ezigbo ikpo okwu ihu igwe na mkpịsị aka gị, igbachi ikiaka gi, na ịmanye aka gị ọnụ. Mgbe ị na-akpọtụrụ bọọlụ, mee ka ogwe aka gị gaa n’ihu na gbagoo ntakịrị wee bufee ibu gị n’ihu. Ga-enwe ike iduzi ebe bọọlụ jiri ubu gị na-aga. Ozugbo ị mụtara nkà abụọ a, ị ga-adị njikere maka ụfọdụ ezigbo osimiri volleyball egwuregwu ma ọ bụ nanị ụfọdụ fun. http://www.beachsupplies.info/ Ndụmọdụ inyeaka maka bọọlụ volịball iji melite egwuregwu gị
Idozi gị obere Generator
Ya mere, i wepụtara igwe na-enye ọkụ na nchekwa gị, jupụta na tank, sere eriri, na ọ dịghị ihe.? Na-atụ anya, ị na-achọpụta nke a TUPU ike ọkụ ma ọ bụ njem ịgba ama ụlọikwuu.? Isiokwu a ga-enyere gị aka idozi ụfọdụ nsogbu ndị ị nwere ike izute.? Tupu ịnwale mmezi ọ bụla, wepu ebua iji gbochie ịmalite na mberede mgbe ị na-arụ ọrụ na ngalaba.? Ọ bụrụ na igwe na-enye ọkụ agaghị ebido ma ọ bụ na ọ gaghị akwụsị ịmalite, lelee ihe mkpuchi a na-afụ afụ maka nsị mba ọzọ.? Ozugbo nke ahụ dị ọcha, lelee gas na mmanụ iji jide n'aka na ị nwere ọkwa kwesịrị ekwesị nke ma.? N'ikpeazụ, gbaa mbọ hụ na puru ọkụ nwere ezigbo njikọ. Ọ bụrụ na alternator ada ada, ọ nwere ike na-agba ọsọ na oke ala nke a na-agba.? Gbanwee rpm.? Nke a nwekwara ike ịpụta site na ihe na - adịghị mma ma ọ bụ windings, nke a ghaghi dochie anya ma sie ike. Ọ bụrụ na voltage na-agba ọsọ na-enweghị ibu na generator, nwere ike ịhazi rpms na obere ọsọ ma ọ bụ dochie capacitor.? N'aka ozo, ma ọ bụrụ na voltaji na-agba ọsọ ala n'okpuru enweghị ibu, nwere ike ịhazi rpms ka oke ọsọ ma ọ bụ dochie capacitor na onye nwere ọkwa dị elu.? Na mgbakwunye, maka obere voltaji, ị kwesịrị ị na-elele gị asọfe-eguzogide ma na-eji dochie gị rotary diodes, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na voltage gị dị mma na enweghị ibu, ma tụlee mgbe ị gbakwunye obere ibu, nwere ike mkpa ịbawanye rpms gị ma ọ bụ wepụ ụfọdụ ibu.? I nwekwara ike dochie anya gị rotary diodes. Ọ bụrụ na voltaji ahụ daa mgbe ị gbakwunye ibu dị elu, ikekwe ị ga-edozi rpms ma ọ bụ wepu ụfọdụ ibu. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na voltaji na-agbanwe, ọ nwere ike ịbụ nsonazụ rụrụ arụ ma ọ bụ nke ruru unyi.? Nwekwara ike ịhazi rpms iji dozie nsogbu a. Idozi gị obere Generator
Bike Buzụchapụta Atụmatụ
Igwe kwụ ọtọ Rightchọrọ maka ịzụta igwe kwụ otu ebe mana amaghị ebe ị ga-ebido? Ikekwe enyi gị na-atụ aro ị nweta ụfọdụ igwe kwụ otu ebe, mgbe enyi biking ọzọ na-ekwusi ike na igwe kwụ otu ebe ya bụ nhọrọ kacha mma maka gị. Onye ka ige?? Kedu maka nke abụọ? Ihe ikwesiri ime bu ka inodu ala, zuru ike ma chọpụta ihe ndị ị na-ebute ụzọ na ihe ndị ị na-ahọrọ iji chọpụta ihe igwe kwụ otu ebe ga-akacha baara gị uru. Ndị a bụ ụfọdụ isi ihe ị ga - achọ ịtụle tupu ịhọpụta wiil ọhụrụ gị. Kedu ihe bụ ịnya ịnyịnya gị? Buru ụzọ jụọ onwe gị ihe mere i ji chọọ iji ịnyịnya malite. Ọ bụ maka mmega ahụ? You chọrọ ofufe site na ikuku maka obi ụtọ ma ọ bụ egwuregwu nke ya? Ebee ka igagoro? Site n'okporo ámá obodo ma ọ bụ ụzọ azụ okporo ụzọ? Ozugbo ị kọwapụtara ụdị ịnya gị, ọ ga-adịrị gị mfe ịhọrọ ụdị igwe ịchọrọ. E Nwere Iche Iche Bike Nhọrọ Dị, ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu: Ugwu Ugwu: Ndị a bụ igwe kwụ otu ebe ị nwere ike iwepụ n'okporo ụzọ. Igwe anyị nwere n'ugwu nwere taya ndị abụba, nkasi obi sara mbara njikwa, na gia di ala maka ighari ugwu di nfe. Bzọ okporo ụzọ: Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime ogologo njem, ịnya ịnya, nke a bụ igwe kwụ otu ebe maka gị. A na-ewu igwe kwụ n'okporo ụzọ maka ọsọ, nwee trịgị na akara aka, na mkpokọta, ọ dịkarịrị mfe. Bikes ngwakọ: Ofdị igwe kwụ otu a na-agwakọta atụmatụ nke igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe. Ngwongwo ngwakọ zuru oke maka ndị chọrọ ịnwale ụdị ịgba ịnyịnya niile. Ndị na-akwọ ụgbọ mmiri: Igwe ndị a n'ozuzu ha bụ otu ọsọ ma wuo ya maka ịkpa ike. Nkasi Obi Igwe: Ndị a bụ ọgba tum tum pụrụ iche ma ọ bụ ngwakọ ndị na-enye ọmarịcha ịnya ịnyịnya na oche dị nro. Ezubere igwe kwụ otu ebe a maka ndị na-agba ịnyịnya chọrọ nkasi obi ọzọ na njem ha. Ihe Ndị Dị Ibu bikefọdụ ụdị igwe kwụ otu ebe na-enye ihe ruru nha asatọ. Iji chọpụta oke kwesịrị gị, tụọ gị inseam’this ga-ekpebi nri size eku, n'usoro nke nguzo-elu-elu. Dị ka otu ụzọ jeans, ikike ziri ezi dị mkpa. Jụọ Ajụla atụla ụjọ ịjụ ndụmọdụ banyere ihe ị na-aghọtaghị, dị ka ntọhapụ ngwa ngwa, mmezi igwe kwụ otu ebe, ụdị akụrụngwa ịchọrọ, wdg. Mara ihe ị kwesịrị ịma bụ ọdịiche dị n’etiti ịnya ụgbọ ala na -adịghị mfe. Zụta igwe kwụ otu ebe ị masịrị were obere nkọwa pere mpe mgbe ị na-azụ igwe kwụ otu ebe: ka o si agba oso, nha, ka o si di, agba–ihe niile. Ka emechara, ọ bụ setị ụkwụ gị–jiri ya na nganga. Bike Buzụchapụta Atụmatụ